Posted by PhyoPhyo at Monday, December 31, 2012 Labels: အထွေထွေမှတ်စု, မေမေ့ရဲ့စာ
Posted by PhyoPhyo at Saturday, December 29, 2012 Labels: စုမီအောင်ရဲ့စာ, ညွှန်းတဲ့ ရုပ်ရှင်
တစ်အိမ်လုံးသုသာန်တစ်စပြင်လို ငြိမ်ဝပ်တိတ်ဆိတ်နေသည်။ ညဉ့်နက်နက်၊ အိပ်ခန်းတစ်ခန်း၊ ခုတင်တစ်လုံး၊ လူနှစ် ယောက်။ အိပ်မောကျနေပုံရသည့် လူယောက်ျားဘေးမှာ Midnight Wine အရောင် ည၀တ်အကျီနှင့် မိန်းမတစ်ယောက်၊ သူမ မျက်လုံးတွေထဲမှာ နာကျင်ထိခိုက်ခံစားနေရပုံက အထင်းသားပေါ်နေသည်။ ဒီမိန်းမ ဘာကို ဒီမျှလောက် နာကျင်ခံစားနေရပါလိမ့် ဟု ကျွန်မတွေးနေစဉ်မှာပဲ ဘေးကလူကို တစ်ချက် စိန်းစိန်းကြီးကြည့်ကာ ရုတ်တရက် ထထိုင်သည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကို ယတိပြတ်ချပစ်လိုက်သည့်ဟန်။ စက်ရုပ်တစ်ရုပ်လို တောင့်တင်းမြန်ဆန်သည့်ခြေလှမ်းများဖြင့် အခန်းထဲမှ ထွက်သွားသည်။ ညကြီးမင်းကြီး ဘယ်ဆီ ထွက်သွားပါလိမ့်။ ကျွန်မ တွေးနေစဉ်မှာပဲ သေနတ်သံတစ်ချက် ဒိုင်းခနဲကြားလိုက်ရသည်။
“ဘုရားသခင် ..ဒီမိန်းမ သူ့ကိုယ်သူ သတ်သေသွားပြီ”
အသံထွက်ရေရွတ်ကာ ကျွန်မ ၀မ်းနည်းသွားသည်။
သူမနာမည် စူဇန်နာ၊ Physio Therapist တစ်ယောက်။ သူမမှာ ခန့်ညားသည့်ရုပ်ရည်နှင့် စမတ်ကျကျဝတ်စား နေထိုင် တတ်သူ ခင်ပွန်း ဆမ်မြူရယ် ရှိသည်။ သူတို့မှာ သမီး မေရီနှင့် သား ဒေးဗစ်တို့ရှိ သည်။ နေရာသစ်ဆောက်လုပ်နေသည့် ဆိုက်ထဲ မှာ အလုပ်သမားအသစ်ရောက်သည်။ အီဗန်တဲ့။ ခင်ပွန်းသည် ဆမ်နှင့်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ရာ ဆမ်က သူ့ဝသီအတိုင်း `လာပါ ကိုယ်က မရွံတတ်ပါဘူး´လို့ ခပ်ငေ့ါငေါ့ပြောရင်း ညစ်ပေနေသည့် အီဗန့်လက်ကို ဖော်ရွေဟန်ပြကာ တလှိုက်တလှဲဟန်အစွမ်းကုန် ဆွဲယမ်းနှုတ်ဆက်သည်။ ဆမ့်လုပ်ပေါက်ကို စူဇန်ကောင်းကောင်းသိသည်။ ပေါင်းလာတာ ၁၄နှစ်ရှိပြီပဲ။ သူ့ကိုယ်သူ လူကြီး လူကောင်း ပုံစံပြလိုက်ပြီး တစ်ဖက်သားကို အလုပ်သမားလို့ တမင်လူတန်းစားခွဲခြား ဆွဲနှိမ့်ပစ်လိုက်တာ။
နေရာသစ်အတွက် ကြွေပြားတွေလိုက်ရွေး၊ လိုအပ်တာလိုက်ဝယ်ရင်း အီဗန့်ကို စူဇန်က `ကျွန်မ ယောက်ျားရဲ့ ပုံစံအတွက် တောင်းပန်ပါတယ်´ ပြောသည်။ ဒီလိုပြောမှ ပိုဆိုးတော့သည်။
“ငါ့လို ခပ်ဖြောင့်ဖြောင့်လူချောနဲ့ တစ်နေကုန် ဆိုက်ထဲမှာ အတူရှိနေတာကို သူ့စိတ်ထဲ မနာလိုအူပွ ဖြစ်နေမှာပေါ့”လို့ အတည်ပေါက်ကြီး အီဗန်ပြောလိုက်သည်။ ရှက်ရယ်ရယ်နေသည့် စူဇန့်မျက်နှာက အီဗန့်စကားကို ခြွင်းချက်မရှိထောက်ခံချင် သလိုလုို။
အီဗန့်အတွက်လုပ်အားခကို `မင်းပဲပေးလိုက်´လို့ ဆမ်ကမှာသည်။ စူဇန်နာ ခပ်မြန်မြန်ပဲ ဆိုက်ထဲကို ကားမောင်း ထွက်လာခဲ့သည်။ ခပ်လှမ်းလှမ်းကနေ အီဗန့်ကိုလှမ်းမြင်သည်နှင့် ကားကို လမ်းဘေး အမြန်ထိုး ရပ်လိုက်သည်။အီဗန့်ဆီ ခပ်သွက်သွက်သွားကာ`ရော့ ရှင့်အတွက်လုပ်အားခငွေ´ဆိုပြီး စာအိတ်ကလေး ကမ်း ပေးနေတုန်းမှာပဲ နမော်နမဲ့ရပ်ခဲ့တဲ့ကားက လမ်းမပေါ်အရှိန်ဖြင့် လျှောဆင်းလိမ့်ထွက်သွားသည်။ အီဗန် လိုက်ဆွဲရာ ကားလည်းအရပ်၊ သူကိုယ်တိုင်လည်း လမ်းဘေး ပလက်ဖောင်းပေါ် ကားခနဲ မှောက်လျားထိုး ပြုတ်ကျသွားသည်။ `အမလေး ဒီလူသေပါပြီ´ စူဇန်ပျာသွားသည်။ ကိုယ့်အလုပ်သမား ကိုယ့်ကြောင့်ဖြစ်တော့ ဆေးရုံလိုက် ပို့ရပြီ။ အီဗန်ခြေထောက် မထောက်နိုင်တော့ ၊ တစ်ပတ်လောက်နားရမည်တဲ့။ အီဗန်က မနားချင်။ မနက်ဖြန် သူ သူ စပိန်ကိုသွားစရာရှိသည်တဲ့။ ဆရာဝန်က ခွင့်မပြု။
“ကျွန်တော်က နေ့စား အလုပ်သမား၊ မနက်ဖြန်တစ်ရက်ပဲနားရတာ၊ နားတဲ့ရက်ကလေး ကျွန်တော့် သမီးနဲ့ သွားတွေ့ ရမှာ သွားမှဖြစ်မယ်”
ဆေးသွင်းပိုက်တွေ ဆွဲဖြုတ်၊ ရုန်းရုန်းကန်ကန်ဆိုတော့ စူဇန့်ရင်ထဲ မကောင်းတော့။ `ကျွန်မကိုယ်တိုင် ကားမောင်းပို့ ပေးပြီး ဆေးရုံကိုပြန်ခေါ်လာပါ့မယ်´လို့ တာဝန်ကျဆရာဝန်ကို ကတိပြု၊ အကိုက်အခဲပျောက် ဆေးဝါးအပြည့်အစုံ၊ ချိုင်းထောက် တစ်စုံနှင့် ခေါ်ထုတ်ခဲ့သည်။ ကားပေါ်မှာ အီဗန်ကရင်ဖွင့်သည်။
“ငါ ထောင်ကျလို့ သမီးနဲ့ကွဲခဲ့တာ”
အီဗန်က တိတိကျကျမဖြေ။ သမီးအတွက်ပါ လို့ပဲ ခပ်တိုးတိုးပြောသည်။ ဟိုရောက်တော့ အီဗန်က သူ့သမီးနဲ့ ညအိပ်နေ ဦး မယ်တဲ့။ တစ်ယောက်တည်းထားခဲ့ဖို့ စိတ်ချလောက်သည့်အနေအထားမဟုတ်လေတော့ စူဇန့်ခမျာ ဟိုတယ်တစ်ခု အနီးမှာရှာ၊ အခန်းငှား ညအိပ်စောင့်ပေးရတော့သည်။ မိုးလင်းတော့ အီဗန့်ဆီလိုက်သွားရာ သမီးနှင့်တွေ့သည်။ အီဗန့်သမီးက ငါးနှစ်အရွယ် လောက်လေး။ နာမည်က ဘီတာတဲ့။ အီဗန့်ဒဏ်ရာကို စူဇန် dressing လုပ်ပေးခဲ့သည်။ ညခင်းမှာ ဟိုတယ်နားက စားသောက် ဆိုင်မှာ အီဗန်နှင့် စူဇန်နာတို့ ညစာထွက်စားသည်။
“အင်း၊ နေ့ခင်းဆို သူ ဘာမှမပြောဘူး၊ ညဆို မေးခွန်းတွေ ဒရစပ်ထုတ်တော့တာပဲ၊ သူသိချင်တာအကုန်မေးပြီးမှ အိပ် တယ်၊ ငါ့ကို ဘယ်သွားနေတာလဲ၊ ဘာလုပ်လဲ အကုန်ကိုမေးတော့တာကွာ”
“ရှင့်သမီးက ငယ်လွန်းတယ်၊ ရှင်ထောင်ကျတဲ့အကြောင်း မပြောမိစေနဲ့”
နှစ်ယောက်သား အပြန်အလှန်စကားဖလှယ်ရင်း ငယ်ပေါင်းတွေလို ရင်းနှီးသွားကြသည်။
အလုပ်မဆင်းနိုင်သေးသည့်အီဗန့်ကို အိမ်အထိ စူဇန်သွားတွေ့သည်။ ဒဏ်ရာကို ပတ်တီးလဲ ဆေးထည့်ပေးသည်။ အစတော့ ရိုးရိုး၊ နောက်တော့ တစ်မျိုးတိုးမိလေသလား၊ စူဇန်နာတစ်ယောက် မိမိအလုပ်ကိုပါ အပျက်ခံကာ အီဗန့်ကိုသွားသွား တွေ့မိသည်။ သွားတိုင်းလည်း စူဇန်က`ကျွန်မအိမ်မပြန်ချင်ဘူး´ ပြောမိတတ်သည်။ ပြီးတော့လည်း ပြန်ရတာပါပဲ။ တစ်ဖက်မှာက အိမ်ထောင်မိသားစု ရှိသေးသည်ကိုး။ ခက်တော့ ခက်ပြီ။ စူဇန်တစ်ယောက် အီဗန်နှင့်မတွေ့ဘဲမနေနိုင်၊ တွေ့ပြီး အိမ်ပြန်ရောက် လျှင်လည်း အရောင်စွန်းထင်းနေသည့် လိပ်ပြာက တစ္ဆေတစ်ကောင်လို နေ့နေ့ညည ရိပ်ရိပ်ဝဲ၀ဲ ခြောက်လှန့်နေပြန်သည်။ နောက် ဆုံး မျိုသိပ်မထားနိုင်တော့ဘဲ ဖြစ်ရပ်မှန်ကို ဆမ်မြူရယ့်အား ဖွင့်ချမိတော့သည်။
“ဆမ်.. ကျွန်မ ချစ်မိနေပြီ”
“ဘယ်လို မင်း ဘာပြောလိုက်တယ်”
ဘယ်သူလဲ၊ ဘယ်ကကောင်လဲ ဆမ်မြူရယ် မသိ။ သူ့ရဲ့ စီးပွားဖက်၊ အားကျဖက်၊ ပြိုင်ဘက် လျှမ်းလျှမ်းတောက် မိတ်ဆွေတွေထဲမှာ ဒီနာမည်မကြားဖူးခဲ့။
“ဟို ကျွန်မရဲ့ကားကြောင့် တစ်ခါ ဒဏ်ရာရဖူးတဲ့လူ”
ဘုရားဘုရား၊ ဆမ့် မျက်လုံးတွေ ပြာဝေသွားသည်။ ကလေကချေ၊ အောက်တန်းစား၊ အလုပ်သမားနဲ့ ကြံကြီးစည်ရာ.. ကွာ၊ ငါ့မှာတော့ ဒီမိန်းမ ဒီသားသမီး အမြင့်ဆုံးမှာ စမတ်ကျကျ နေရအောင် ကြိုးစားလိုက်ရတာ၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိစ္စမရှိ။ မိန်းမတွေ ဟာ ဆေးလိပ်လေးတဖွာဖွာ ဘီယာလေးတမြမြနဲ့ အပြောကောင်းတဲ့ ယောက်ျားဆို ယစ်မူးသာယာပြီး စိတ်ကူးထဲ ထည့်ယဉ်ပစ် တတ်ကြတာ ဓမ္မတာပဲ။ ဒီကောင် င့ါထက်အပြောကောင်းလို့ဖြစ်မှာပေါ့၊ ချစ်မိရုံပဲဆို အကြောင်းမဟုတ်။ ဆမ်မြူရယ်တွေးကာ သိချင်စိတ်ပြင်းပြလာသည်။
ဘာမှမဖြေသည့် ဇနီးသည်ကိုကြည့်ကာ ဆမ်မြူရယ် ယောက်ယက်ခတ်သွားသည်။ ပခုံးတွေကို ကိုင်ဆွဲလှုပ်ကာ ဒရစပ် မေး လိုက်သည်။
“ဟင်..ဖြေလေ၊ ဘယ်နှခါ တွေ့ပြီးပြီလဲ ဘယ်နှခါရှိပြီလဲ၊ ဖြေစမ်းဖြေလေ”
“ဒါက အဓိကမဟုတ်ပါဘူး” တဲ့။ ဒါဖြင့် ဘာကအဓိကလဲ။ ပြောရခက်နေပုံရသည့် စူဇန့်မျက်နှာကို ဆမ်မြူရယ်မကြည့်ရက် တော့။ ပြတင်းတံခါးဆီ အကြည့်လွှဲဖယ်ကာ ထပ်မေးမိသည်။
“ ဘယ်မှာ တွေ့ကြတာလဲ”
အသုံးမကျတဲ့မိန်းမ၊ ဒီကောင်က မင်းဆီလာတာမဟုတ်ဘဲ မင်းက မနေနိုင်မထိုင်နိုင် သွားသွားနေတဲ့သဘောပေါ့။ နွမ်း ဖတ်နေသည့် ဇနီးသည်မျက်နှာကို စိုက်ကြည့်ကာ ဆမ်မြူရယ့် စိတ်ထဲ ယူကျုံးမရ ဖြစ်သွားသည်။ ဘာလုပ်ရမည်မှန်း ဆမ်မြူရယ် မသိ။ ကမ္ဘာနဲ့ချီသည့် စီးပွားရေးပြဿနာ အခက်အခဲတွေ ထောင်သောင်းမက သူ ဖြေရှင်းလိုက်လျှင် အလွယ်ကလေး။ အခု သူ့မိန်းမ လင်ငယ်ထားနေသည့် ကိစ္စကို သူ မဖြေရှင်းတတ်တော့။ ရှက်စရာ ခံပြင်းစရာ၊ ဒီကောင်က င့ါထက် ဘာသာလို့လဲ။ ခက်တာက ငါအကြမ်းပတမ်းလုပ်လိုက်ရင် ဟိုဘက် ပိုပါသွားမလားပဲ..တွေးကာ ဆမ်မြူရယ် ၀မ်းနည်းလာသည်။ ယောက်ျားတန်မဲ့ မျက်နှာကို လက်ဝါးတွေထဲ ထိုးဝှက်ကာ ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုချမိတော့သည်။ ဘ၀ကို ဟန်ကျပန်ကျ ဖြတ်သန်းနိုင်ခဲ့သည်သာမက တစ်လျှောက်လုံး မာန်မာနအပြည့်နှင့် စမတ်ကျကျနေထိုင်ခဲ့သူ ခင်ပွန်းသည်အား ငိုကြီးချက်မပုံစံနှင့် တွေ့ရသည့်အခါ စူဇန့်စိတ်ထဲ ငါဘာတွေလျှောက် လုပ်ခဲ့ပါလိမ့်လို့ နောင်တတစ်ချက်ရသွားသည်။ လှုပ်ခါနေသည့် ဆမ့်ပခုံးကို ပွေ့ဖက်ကာ ကတုန်ကယင် ပြောမိသည်။
“အို ဆမ်၊ ဆမ်ရယ် ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ ကျွန်မ သူ့ကို နောက်တစ်ခါ မတွေ့တော့ဘူး၊ ကတိပေးပါတယ်”
အပြစ်ရှိတာချင်းအတူတူ စူဇန့်အပြစ်က ပိုကြီးသည်၊ စူဇန်က မိန်းမမဟုတ်လား။ အိမ်ထောင်ရှိမိန်းမတစ်ယောက်အနေနှင့် အခြားယောက်ျား တစ်ယောက်က အမှန်တကယ်ချစ်လာသည်ဖြစ်စေ၊ ရလိုရငြားစိတ်နဲ့ဖြစ်စေ မည်သို့ချဥ်းကပ်ချဉ်းကပ် နည်းမျိုးစုံ နှင့် ရှောင်တိမ်းထွက်နိုင်ရမည်မဟုတ်လား။ အခုတော့ စူဇန်က ရုန်းထွက်ရန်မဆိုထားနှင့် မီးရှိရာကို ရူးရူးမိုက်မိုက် တိုးဝင်ချင် နေသည့် ပိုးဖလံမလေး ဖြစ်ခဲ့ပြီ။
အီဗန့်အနေနှင့် ဆင်းရဲပင်ပန်းစွာဖြတ်သန်းရင်း ဘ၀မှာ တစ်ကြိမ် ထောင်ကျဖူးသော်လည်း အကျင့်ပျက်ယောက်ျား တစ်ယောက်မဟုတ်။ သူ့ဘ၀မှာ လက်ညှိုးထိုးစရာအပြစ်က လင်ရှိမိန်းမတစ်ယောက်ကို ချစ်ကြိုက်မိခြင်းပါပဲ။ သို့ပေမဲ့ ဆမ်မြူရယ် သိ သွားပြီဆိုသည့်အခါ ယောက်ျားခြင်း စာနာစိတ်နှင့် သူ့စိတ်သူထိန်းချုပ်ကာ စူဇန့်ကို ရှောင်သည်။ အိမ်ပြောင်းလိုက်သည်။ အလုပ်ပြောင်း လိုက်သည်။ အမှားထဲ ခေါင်းစိုက်ထိုးထည့်ထားလျှင် ကိုယ်တိုင်ပဲ အသက်ရှူကျပ်မှာပေါ့၊ အမှန်ရှိရာ ဦးမော့ကာ သူ့အခြေအနေတွေ ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ အီဗန်ကြိုးစားသည်။ ခက်သည်က စူဇန်နာ။ ငိုကြွေးနေသည့် လင်ယောက်ျားကို မကြည့်ရက် နိုင်ဖြစ်ကာ ကတိပေးလုိုက်ပေမဲ့ စိတ်က အီဗန်နှင့် ထပ်တွေ့ရဖို့သာ ဇောကပ်သည်။ ဖုန်းမကိုင်ဘဲ ရှောင်တိမ်းနေသည့် အီဗန့်ကို သဲသဲမဲမဲလိုက်ရှာသည်။ ယူဇီရပ်ကွက်က စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ တွေ့သည်။ စူဇန့်အချစ်ကို အီဗန်အသိအမှတ်ပြုချင်ပေမဲ့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အခက်မတွေ့စေချင်တော့ စူဇန့်ကို တည်ကြည်စွာငြင်းပယ်ရသည်။ `အလုပ်လုပ်ချိ်န် စကားပြောလို့မရ ဘူး´ `ငါမအားဘူး´။ ဘယ်လိုပြောပြော စူဇန်က မပြန်။ ခေါင်းမာမာနှင့် စောင့်သည်။ မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ချိန်မှာ `ငါတို့နှစ်ယောက် ဇာတ်လမ်းက ရှေ့ဆက်လို့မရနိုင်ဘူး´လို့ အားတင်း ပြောလိုက်သည်။ ဒီလောက်ပြောလျှင်တော့ စူဇန်လက်လျှော့မည်လို့ အီဗန် ယူဆသည်။ သူ့အထင် မှားသွားပြီ။
“ကျွန်မကတော့ ရအောင် ရှေ့ဆက်မှာပဲ”
စူဇန်က သည်လိုပြောနေမှတော့ အီဗန်က ဘာသားနဲ့ထုထားတာမို့လဲ၊ ယောက်ျားလေ။ တင်းခဲထားသည့် စိတ်တွေ ချည့်နဲ့ပြိုကျသွားသည်။ စူဇန်က သူ့မျက်လုံးတွေကို တည့်တည့်စိုက်ကြည့်ကာ ခိုင်ခိုင်မာမာပြောလိုက်သေးသည်။
“ကျွန်မ သူ့ကို စိတ်ပျက်နေတာကြာပြီ၊ ရှေ့ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး ရှင်နဲ့ပဲ ကုန်ဆုံးလိုက်ချင်တော့တယ်”
ချစ်ဇောအဟုန် မကုန်နိုင် မခမ်းနိုင်၊ တားမရဆီးမရဖြစ်နေသည့် ရင်ခွင်ထဲက မိန်းမကို အီဗန်ငြင်းချက်မထုတ်နိုင်အောင် သဘောကျသွားသည်။
“အချစ်လေး မင်း ရူးများ ရူးသွားပြီလား၊ အင်း…မင်းရူးလေ ငါကြိုက်လေပါပဲကွာ…”
သောက်လေ ငတ်လေ ဘယ်တော့မှ ဆာငတ်မပြေနိုင်သည့် ပင်လယ်ရေငန်ကို ပြိုင်တူသောက်ရင်း စူဇန်နှင့် အီဗန် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အဟုတ်ထင်ပစ်လိုက်ကြသည်။
“ဟိုကောင့်ကို မင်းဖြတ်တော့ မင်းကငါ့မိန်းမ ငါ့အတွက်ပဲဖြစ်ရမှာ”
ဆမ်မြူရယ်ဒေါသပုန်ထပြီ။ နှစ်ယောက်သား ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ထွေးလုံးရစ်ပတ်ပြီး ခြေကုန်လက်ပန်းကျ မောဟိုက်ချိန်မှာ စူဇန်က နွမ်းဟဟအသံနှင့်တောင်းပန်သည်။
“ကျွန်မလည်း မတတ်နိုင်တော့ဘူး၊ ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မလည်း မုန်းမိပါတယ်၊ ကျွန်မကို သွားခွင့်ပြုပါ”
“ငါ့ဆီကထွက်သွားတာနဲ့ မင်းဘ၀ ဒုက္ခရောက်မှာပဲ၊ မင်းတို့ အဆင်ပြေမယ်ထင်လို့လား၊ မင်းတို့မှာ ဘာပိုင်ဆိုင်မှုရှိလို့လဲ၊ နေစရာတောင်ရှိလို့လား”
စူဇန်က`မြို့ထဲမှာ လုပ်စရာအလုပ်တွေပေါပါတယ်´တဲ့။ မရှိစဖူး သတ္တိတွေ ထူးကဲရှိနေသည့် စူဇန့်ကိုကြည့်ကာ ဆမ်မြူ ရယ် စွေ့စွေ့ခုန်သွားသည်။ `မင်း ဘာအလုပ်မှလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး ကြည့်နေ´ လို့ခြိမ်းခြောက်စကားဆိုလိုက်သည်။ သူ့စကား အတိုင်းပဲ ဆမ်မြူရယ်က ဂုဏ်ရှိန်ပါဝါသုံးကာ မြို့တော်ဝန် ဘာရီလာနှင့်ပေါင်းပြီး အခွင့်အလမ်းမှန်သမျှ ပိတ်ဆို့ပစ်လိုက်သည်။ နှစ်ယောက်လုံး၏ အကြွေးဝယ် ကတ်၊ ငွေထုတ်ကတ်တွေ ဘာမှသုံးမရတော့။ မစားရတဲ့အမဲ သဲနဲ့ပက် ပြောမလား၊ ပြောလည်း ခံလိုက်ရုံ။ `ဖောက်ပြန်နေတဲ့ မိန်းမကို ကာမပိုင်လင်ယောက်ျားအနေနဲ့ သဲနဲ့ပက်ခွင့်တော့ရှိမှာပဲ' လို့ အတွေးရိုင်းရိုင်းတွေ ဆမ်မြူရယ်တွေးပစ်လိုက်သည်။ စူဆန်နှင့်အီဗန်ဒုက္ခရောက်ပြီ။ စူဇန် ဆမ်မြူရယ်နှင့်သွားတွေ့သည်။
“ကျွန်မတို့ကို Black List ထဲရောက်အောင် လုပ်နေတဲ့ ရှင့်လုပ်ရပ်တွေ ရပ်တန်းကရပ်တော့”။
“ရပ်မယ်လေ..မင်း ငါ့ဆီ ပြန်လာရင်ပေါ့…”
“ဒါဆိုလည်း ဒါ မင်းရွေးတဲ့လမ်းပဲ”
နောက်ဆုံး စူဇန်က ဆမ်မြူရယ့်အိမ်ထဲ ညဘက်ခိုးဝင်ကာ ပိုင်ဆိုင်သမျှတွေကို အကုန်ယူထုတ်သည်။ ဆမ့်လုပ်ရပ်အပေါ် စိတ်အချဉ်ပေါက်ပေါက်နှင့် မပိုင်ဆိုင်သည့်အရာတွေပါ ယူပစ်လိုက်သည်။ `သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကို မယူစမ်းပါနဲ့ကွာ´အီဗန်တားပေမဲ့ စူဇန် ဂရုမစိုက်၊ `ရှင်မလုပ်နိုင်ရင် ကျွန်မတစ်ယောက်တည်းလုပ်မယ်" တဲ့။ သည်လိုနှင့် အီဗန်ကြံရာပါဖြစ်ရပြီ။
မနေ့ညက ခိုးယူလာသည့် ပန်းချီကားတွေကို အီဗန်သွားရောင်းပေးနေသည်။ တော်တော်နှင့်ပြန်မလာတော့ စူဇန်စိတ် ပူလာသည်။ တံခါးခေါက်သံကြားလျှင် ၀မ်းသာအားရထဖွင့်လိုက်သည်။ မျှော်တာတစ်ယောက် ရောက်လာတာတစ်ယောက်။ တံခါးဝမှာ အနိုင်ရမျက်နှာနှင့် ဆမ်မြူရယ်။
“သူပြန်မလာဘူး၊ ရှင် သူ့ကိုဘာလုပ်ထားလဲ၊ ဒါတွေအားလုံး ကျွန်မ စီစဉ်တာ၊ သူ့ကိုဘာမှ သွားမလုပ်ပါနဲ့၊ သူဘယ်မှာ လဲ…”
“ခိုးရာပါပစ္စည်းရောင်းလို့ လက်ပူးလက်ကြပ်မိတာပဲလေ၊ ဒီကောင်က ထောင်ကျဖူးတဲ့ကောင်ပဲ၊ ထောင်က သူ့အတွက် ဘာမှ မဆန်းဘူး”
“သူ့ကို လွှတ်ပေးပါ၊ ကျွန်မ ဘာလုပ်ပေးရမလဲပြော ရှင်ဖြစ်စေချင်တာ ဖြစ်ရပါမယ်”
အီဗန်လွတ်မြောက်စေလိုသည့်စိတ်နှင့် စူဇန်တောင်းပန်တိုးလျှိုးမိသည်။ ဆမ့် အကြိုက်ပေါ့။ ဆမ်မြူရယ်လိုချင်တာ ဒါပဲလေ။
နောက်ဆုံး စူဆန်အိမ်ကို ပြန်ရောက်ခဲ့ရပြီ။ အမေ့ကို စကားမပြောချင်တော့ဘူးလို့ဖုန်းဆက်ပြောသည့် သမီးက အခုလို အမေအိမ်ပြန် ရောက်လာတော့လည်း နာကျင်စရာတွေမေ့ကာ အရင်လို ချစ်ရပြန်သည်။ အမေက အမေပဲကိုး။ ဘာတွေလုပ်လုပ် ဘယ်ဆီရောက် ရောက် `အမေ့ကိုချစ်တယ်´လို့ မက်ဆေ့ဂ်ျလေးပို့လေ့ရှိသည့် သား ကတော့ အမေအိမ်ပြန်ရောက်လာတာ အတိုင်းထက်အလွန် ပျော်ပါသည်ပေါ့။ သို့ပေမဲ့ အမေတကယ်ပျော်ဖို့က အဓိက။ အမေ့ပါးကို ဖွဖွလေးနမ်းရင်း အမေ့ရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်း အစစ်အမှန်က ဘယ်ဆီမှာပါလိမ့်လို့ စာနာစိတ်နှင့် တိတ်တခိုးအဖြေရှာနေမိသည်။ စိတ်ရောလူပါ ချုံးချုံးကျကာ အိပ်ရာထဲ အနားယူနေရသည့် စူဇန့်ကို ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဖူးသလို ဆမ်မြူရယ်က အရင်လုိုကြင်နာဟန်အပြည့်နှင့် ပြုစုယုယသည်။ ဆေးတိုက်၊ ရေတိုက်သည်။ အနားက မခွာ။ နေကောင်းပြီလား နဖူးလေးကို စမ်းသည်။`ယောက်ျားတွေမာယာများရင် မိန်းမလိုက်မမီ´လို့ စူဇန် တွေးကာ ဆမ်မြူရယ့် အပေါ် အယုံအကြည်မရှိတော့။ သူ့မိန်းမပီပီ သူ့အနားမှာ ထမင်းဟင်းချက်ပေးတာ၊ လိင်မှုကိစ္စဖြည့်ဆည်း ပေးတာ၊ ဒါတွေမျှော် လင့်ပြီး ငါကျန်းမာအောင် ပြုစုပေးနေတာ၊ ဒါ သူ့အကျိုးအတွက် သူလုပ်တာ။ သွား မလာနဲ့ဆမ်။ ရှင့်ကို ကျွန်မ စိတ်ကုန်တယ်၊ စိတ်ပျက်တယ်။ မယုံဘူး။
အိပ်ရာထဲလဲနေသည့် ပြင်သစ်အမျိုးသမီး စူဇန်နာ့ကိုကြည့်ကာ သူမနှင့်ထပ်တူ စိတ်ရောကိုယ်ပါ နုံးခွေချည့်နဲ့ သွားတော့ သည်။ စူဇန်နာ့ အတိတ်ဘ၀ထဲက ပြန်ထွက်လာချိန်မှာ ကျွန်မဦးခေါင်းတစ်ခုလုံး ရှုပ်ထွေးနောက်ကျိလို့နေသည်။ ပိုးဖလံ၊ အဆိုးမလေးပဲလို့ ကရုဏာဒေါသောနှင့် ကျွန်မ ရေရွတ်မိသည်။ ကြည့်နေဆဲမှာပဲ မြင်ကွင်းက အစပိုင်း ပုံရိပ်တွေဆီ ပြန်ရွေ့ သွားသည်။
Midnight Wine အရောင် ည၀တ် အကျီနှင့် မိန်းမချောလေး စူဇန်နာ ရေးကြီးသုတ်ပျာဟန်နှင့် အိပ်ရာကနေ ထထွက် သွားသည်။ ဟုတ်တာပေါ့။ သေဖို့လုံလောက်သည့် ပြစ်ချက်တွေနှင့် ခန္မ္ဓာတစ်ကိုယ်လုံးပြည့်နှက်နေမှတော့ သူမကိုယ် သူမ သတ်သေဖို့ သေနတ်တစ်လက်သွားရှာတာပဲ ဖြစ်မည်ပေါ့။ အစပိုင်းမှာ သေနတ်သံတစ်ချက် ကျွန်မ ကြားခဲ့ရသည်ပဲ။ ကြည့်နေဆဲ မှာပဲ စူဇန်နာ သေနတ်တစ်လက်နှင့် အိပ်ခန်းထဲပြန်ဝင်လာသည်။ ခင်ပွန်းသည် ဆမ့်ရှေ့မှာ သူမအပြစ်တွေ ၀န်ခံဖြောင့်ချက်ပေးပြီး သူမကိုယ်သူမ ရဲရဲတင်းတင်း သတ်သေပြမလို့ပဲ ဖြစ်မှာပေါ့။
အို..ဘုရားခင် ဘယ်လိုပါလိမ့်…သေနတ်ပြောင်းဝက ဆမ်မြူရယ့်ဘက်ကိုချိန်ထားပါလား…။
ဒိုင်းခနဲ မြည်သံနှင့်အတူ စိတ်ချလက်ချအိပ်ပျော်နေ ပုံရသည့် ဆမ်မြူရယ့်ရင်ဝကနေ သွေးတွေ စိမ့်ထွက်လာသည် ကို မြင်လိုက်ရချိန်မှာ ကျွန်မ ရင်ဝမှာလည်း ပူထွက်သွားသည်။ တစ်ကိုယ်လုံးလူသေလို တောင့်တင်းသွားသည်။ ကယောင်ချောက်ချား ဟန်ဖြင့် လှေကားကနေ ပြေးဆင်း ကားမောင်းထွက်သွားသည့် စူဇန်နာ့ကို ကျွန်မ ဆက်မကြည့်ချင်၊ မကြည့်လည်း မကြည့်ရက် တော့ပါ။
စူဆန် အခုသွားမှာ အီဗန့်ဆီပဲဖြစ်မှာပေါ့။ သူချစ်သည့် မိန်းမက သူ့ဆီ အပြီးတိုင်ရောက်လာခဲ့ပေမဲ့ အီဗန် ပျော်ရွှင်မည် မဟုတ်လို့ ကျွန်မ အတပ်ပြောရဲသည်။ အိပ်ပျော်နေသည့်ခင်ပွန်းကို သွေးအိုင်ထဲမှာ ပိုးစိုးပက်စက် ပစ်ထားခဲ့ပြီး ပူလောင်ချောက်ချား သည့် လက်တွေနှင့် ဖက်တွယ်ဖို့ စူဇန်က ရောက်လာခဲ့သည်ပဲ။ အီဗန် ဘယ်လိုပျော်ရွှင်နိုင်ပါ့မလဲ။
တစ်ယောက်ကတစ်ယောက်ကို ချန်ထားရစ်ခဲ့ဖို့ အကြောင်းဖန်လာပြီဆိုဦးတော့ အခု စူဇန်နာ့လုပ်ရပ်လို မဟုတ်ဘဲ လှပစွာ ချန်ထားတတ်ဖို့လည်း လိုလိမ့်မည် ဆိုတာပါပဲ။ လှပစွာချန်ရစ်ဖို့ ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်၊ အကျည်းတန်စွာ၊ တိတ်ဆိတ်စွာ ချန်ထားရစ်ခဲ့ဖို့ ရွေးချယ်ရတော့မည် ဆိုလျှင်လည်း ကျွန်မသာဆိုလျှင် အရာရာအကျည်းတန်စွာ တိတ်ဆိတ်အဆုံးသတ်ပေးလိုက်မည့် သေနတ်သံတစ်ချက်ကို ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ အတွက်သာ ရွေးချယ်လိုက်မှာ သေချာပါသည်။
Film – Leaving (French – Partir)
Cast – Kristin Scott Thomas (SuSanne)
Sergi Lopez ( Ivan)
Yvan Attal ( Samuel)
Posted by PhyoPhyo at Saturday, December 29, 2012 Labels: ကဗျာ
မရွေးကောက်ဘဲ ဖြိုးမောက်လာတဲ့ အနာဂတ်တွေ လွှတ်ချလိုက်
မဆွတ်ရဘဲ ညွှတ်ကျနေတဲ့ ကုလားထိုင်အိုတွေ လွှတ်ချလိုက်
အာသီးမပါဘဲ ညာဖြီးဆိုတဲ့ ဒီမိုသီချင်းတွေ လွှတ်ချလိုက်
အိပ်မပျော်ဘဲ မက်ရရှာတဲ့ အိပ်မက်ဗလာတွေ လွှတ်ချလိုက်
မတွက်ချက်ဘဲ ရုပ်ဖျက်ဟောတဲ့ နိမိတ်ဆိုးတွေ လွှတ်ချလိုက်
တံခါးမခေါက်ဘဲ ဗြောက်သောက်လာတဲ့ ဧည့်သည်မျောက်တွေ လွှတ်ချလိုက်
တံဆိပ်မကပ်ဘဲ ဖြတ်ဝင်လာတဲ့ စလယ်ဝင်အိုးတွေ လွှတ်ချလိုက်
မဖိတ်စဉ်ဘဲ ရွှဲစိုနေတဲ့ ကြမ္မာအငြိုးတွေ လွှတ်ချလိုက်
အလွတ်မရဘဲ ဇွတ်ကနေတဲ့ ဒရာမာအသိုးတွေ လွှတ်ချလိုက်
လိုက်သူမရှိဘဲ ထွက်ပြေးနေတဲ့ စိတ်ဆင်ရိုင်းတွေ လွှတ်ချလိုက်
အသံမရှိဘဲ ဟန်မိနေတဲ့ လက်ခုပ်လက်ဝါးတွေ လွှတ်ချလိုက်
စိတ်မရှိဘဲ အရိပ်ငြိနေတဲ့ ခြောက်ပီတိတွေ လွှတ်ချလိုက်
မစိုက်ပျိုးဘဲ ရိတ်သိမ်းနေတဲ့ အတိတ်သမိုင်းတွေ လွှတ်ချလိုက်
ကုလားမနိုင်ဘဲ ရခိုင်မဲနေတဲ့ အနိုင်ဖဲတွေ လွှတ်ချလိုက်
အမေးမရှိဘဲ အဖြေကြိုထုတ်တဲ့ သရုပ်သကန်တွေ လွှတ်ချလိုက်
လွှတ်ချလိုက် လွှတ်ချလိုက် အားလုံးကို လွှတ်ချလိုက်
ဒီကဗျာကို ဖတ်ပြီးရင် ခင်ဗျားမျက်စိထဲက လွှတ်ချလိုက်
Posted by PhyoPhyo at Friday, December 28, 2012 Labels: ဟိုသတင်း ဒီသတင်း
အဒဲလ် ရဲ့ ၂၀၁၂
Skyfall သီချင်းသီဆိုခဲ့တဲ့ Soul, R & B အဆိုတော်အဒဲလ်ဟာ ၂၀၁၂ ရဲ့ Billboard စာရင်းမှာ ထိပ်ဆုံးက နေရာယူထားခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၂၄ အရွယ် အဒဲလ်ဟာ ၂၀၁၂ မှာပဲ ထိပ်ဆုံးက ရှိနေခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ၂ နှစ်စာလောက် လူကြိုက်အများဆုံး အဆိုတော်ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ အမျိုးသားအဆိုတော်ထဲမှာတော့ hip hop စတားလ် ဒရိတ်ခ် က ထိပ်ဆုံးကပါ။ အဒဲလ်ရဲ့ ပထမအယ်လ်ဘမ် “19” နဲ့ ဒုတိယအယ်လ်ဘမ် “21”မှာ 21 က ပိုပြီးလူကြိုက်များခဲ့တယ်။ ဂရမ်မီ ၆ ဆုကိုလည်း ၂၀၁၂ မှာ ပိုင်ဆိုင်ရရှိခဲ့ပြီး ယူအက်စ်ဂီတလောကမှာ လွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့သလို ယူကေရဲ့ Billboard မှာပါ ထိပ်ဆုံးမှာနေရာယူထားနိုင်ခဲ့တာပါ။ X Factor စတား ပေါ့ပ်အဖွဲ့ လူငယ်လေးငါးယောက် One Direction ဟာလည်း လူသစ်တန်းအဆိုဆု နဲ့ Mumford & Sons(folk, rock) အဖွဲ့က နံပါတ် ၁ alternative, folk အဆိုအဖွဲ့အဖြစ် ဖော်ပြခဲ့ကြတယ်။
Posted by PhyoPhyo at Friday, December 28, 2012 Labels: ရောင်စဉ်တွေထဲက အိမ်ခန်းလေးများ
ရာသီဥတုအလွန်အမင်း အေးမြလွန်းလှတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်တော့ ဆောင်းရာသီထဲ တည့်တည့်တိုးဝင်မရောက်ရှိသေးခင်မှာပဲ “ဆောင်းရာသီမှာ” ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ အဆင်ပြေပြေနေထိုင်နိုင်စေဖို့ ပြင်ဆင်ကြရတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အိမ်ခန်းလေးကို မွမ်းမံပြင်ဆင်တာတွေ၊ အစားအသောက် အသီးအနှံတွေကြိုတင်စုဆောင်းကြတာတွေ မဖြစ်မနေပြုလုပ်ကြရတာပါ။ အပူချိန် သုညဒီဂရီအောက်ရောက်သွားကြတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် သစ်သီးဝလံ၊ အသီးအရွက်တွေလည်း မသီးမပွင့် မဝေဆာနိုင်တော့ပါဘူး။ အရိုးပြိုင်းပြိုင်း အရိုင်းဆန်ဆန်အပင်တွေနဲ့ ဟိုး မြေပြင်က မြက်ပင်လေးတွေဟာ နှင်းမှုံတွေရဲ့ အကွယ်အကာကိုယူပြီး ကြမ်းတမ်းတဲ့ရာသီဥတုကို အံတုရတာပါ။ နှင်းစက်မွမွလေးတွေဟာဖြင့် သစ်ပင်လေးတွေကို အဖုံးအကာသဘောမျိုး ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ပိုလို့ အေးလွန်းလာတဲ့အချိန်မှသာ ဖြူဖြူလွလွ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနှင်းမှုံလေးတွေဟာ မာကျောကျစ်ခဲလာပြီး ရေခဲဖြစ်သွားကြတာပေါ့။ ရေခဲအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ လမ်းသွားလမ်းလာ လူ၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် နဲ့ သစ်ပင်လေးတွေအတွက်ပါမကျန် အန္တရာယ်ပေးကြတော့တာ။ ရေခဲပြင်တွေမှာ ချော်လဲထိခိုက်ဒဏ်ရာရနိုင်တယ်။ တွဲလောင်းကျနေတဲ့ ရေခဲပန်းဆွဲတွေက ကျိုးပဲ့ကျလာခဲ့ရင်လည်း ထိခိုက်နိုင်တာပေါ့။ အဲဒီလို တိုင်းပြည်တွေမှာဆိုရင် ရာသီအလိုက် အိမ်ခန်းပြုပြင်မှုဟာ အိမ်ခန်းလေးတွေအတွင်းမှာပဲ ရောင်စဉ်လှလှပစ္စည်းလေးတွေ နေရာချပေးရုံနဲ့ မလုံလောက်တော့ပါဘူး။ ပြတင်းပေါက်တွေ၊ တံခါးတွေမှာ လေဝင်လေထွက်မရှိအောင်စစ်ရတယ်။ ပြတင်းတံခါးတွေမှာ လေအေးအေးမဝင်နိုင်အောင်ဖော့သားတွေကို အတွင်းအနားသားတွေမှာ လိုအပ်တဲ့အခါ တပ်ရပါတယ်။ ပြတင်တံခါးတွေမှာ မှန်ထူထူ နှစ်ထပ် သုံးထပ်တပ်ကြရတယ်။ ပြတင်းတံခါးပေါက်အနားသားတွေမှာ ရာဘာ၊ ဖော့လို အသားတွေ အပြည့်ကပ်ထားပါမှ ကြမ်းတမ်းတဲ့အအေးဒဏ်ကို ကာကွယ်နိုင်ကြတာပါ။
Posted by PhyoPhyo at Sunday, December 23, 2012 Labels: ပင်ကိုရေးဝတ္ထုရှည်, မေမေ့ရဲ့စာ
သင်္ကြန်အတက်နေ့ ရောက်သည့်တိုင် ကိုကိုဆိုတာ အရိပ်အရောင်မမြင်ရ သူဘယ်လို ကျွန်မကို ဆက်သွယ်မလဲ။ ကျွန်မကရောသူ့ ကို ဘယ်လို မျိုး စတင် ဆက်သွယ်ရမလဲ။ ကျွန်မရင်ဖို စောင့်စားနေခိုက်….။ ကျွန်မတစ်ကိုယ်လုံး ရေတွေရွဲရွဲစိုအောင် ပခုံးကနေ လောင်းချလိုက်သူက သူငယ်ချင်းကိုဇေယျာမြင့်၊ ကိုယ်ပေါ်ကနေ လျောကျလာတဲ့ ရေတွေက တိုက်အောက်ထပ် နောက်ခန်းသမံတလင်းတခုလုံး သို့ပျံ့ နှံ့သွားတော့သည်။
“ခွေးတိရိစ္ဆာန် ..လာစမ်း လာစမ်း. မိ မဆုံးမ ဘ မဆုံးမ နေနှင့်အုံး"
ဗြစ်တောက် ဗြစ်တောက်နှင့် မေမေ တယောက် ပြောပြောဆိုဆို မီးဖိုထဲမှ ထွက်ချလာသည်။ သူငယ်ချင်းလဲ ဖလားချပြီး ကစဥ့်ကရဲ ပြေးလေရာ မေမေက ဖိနပ်ချွတ်ပြီး အားနှင့်မန်နှင့် အတင်းကိုလိုက်ပေါက်တော့တာ။
“ငါ့သမီး လမ်းမထွက်ကမြင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဟေ့..မိနဲ့ဘနဲ့ ဒီမှာ လူကြီးရှိတယ်။ ခွင့်တောင်းရတယ် ..နားလည်လားဟဲ့။"
Posted by PhyoPhyo at Saturday, December 22, 2012 Labels: အထွေထွေမှတ်စု
Far north, in Rovaniemi, Finland,
"the official home of Santa Claus" has many attractions, including Santa himself.
ခရစ်စမတ် ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ ခရစ်စမတ်ပွဲတော်ကို အဘယ်ကြောင့်နှစ်စဉ် ကျင်းပနေကြ သနည်း။ တချို့ က ခရစ်စမတ်ဆိုသည် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တို့၏ အထိမ်းအမှတ် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတစ်ခုဟု အထင်ရောက်ကြသည်။ တချို့ကလည်း ခရစ်စမတ်ကို ပြက္ခဒိန်တွင် အနီရောင်ရက်စွဲဖြင့်ဖော်ပြထားသည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရုံးပိတ်ရက်၊ အားလပ်ရက်ဟု ယူဆကြသည်။ မည်သို့ဆိုစေ ယခုအခါ နိုင်ငံမရွေး၊ ဘာသာမရွေး၊ လူမျိုးမရွေး၊ အဆင့်အတန်းမရွေး၊ လူကြီးလူငယ်မရွေး လူသားအားလုံး ဆင်ယင်နွှဲပျော်ကြသည့် ခရစ်စမတ်နေ့ အကြောင်းကို လူတိုင်း သိရှိနားလည်ရန်လိုအပ်သည်ဟု ယူဆလျက် ဤဆောင်းပါးကို ရေးခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့လူသားများသည် အကြိမ်ဘယ်လောက်မြောက် ဆိုကာ မွေးနေ့များ ကျင်းပလေ့ရှိ၏။ ခရစ်စမတ်သည် ထိုမွေးနေ့များ ကျင်းပပုံနှင့်မတူပါ။ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်တိုးသွားသော ငွေရတု၊ စိန်ရတု၊ နှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ်နေ့များ ကျင်းပပုံနှင့်လည်း မတူပါ။ သခင်ယေရှု၏ ဘယ်နှကြိမ်မြောက်မွေးနေ့ဟု မရှိပါ။ ဖွားမြင်ခဲ့သည့် အချိန်ကာလလေးကို ပြန်လည်အောက်မေ့ရန်အလို့ငှာ ခရစ်စမတ်နေ့ ဟု နှစ်စဉ် ကျင်းပခြင်း ဖြစ်၏။ မနှစ်က ခရစ်စမတ်တွင် အမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမားသည် အိမ်ဖြူတော် တောင်ဘက်ဥယျာဉ်မှာ နိုင်ငံတော် ခရစ်စမတ်နေ့အဖြစ် ခမ်းနားစွာကျင်းပခဲ့ရာ စန်တာကလော့စ်က နိုင်ငံတော်တီးဝိုင်းဖြင့် သီချင်းများ သီဆိုဖျော်ဖြေခဲ့ပြီး သမ္မတ ကတော် မီရှယ်က ကလေးများအား အသံနိမ့်မြင့်တက်ကျ စုံလင်စွာဖြင့် ပုံပြင် ဖတ်ပြ၊ ပြောပြခဲ့သည်ကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်တွေ့ရသည်။
Christmas ဟူသောစကားလုံးသည် Christes Moesse ဟူသော စကားလုံးမှ ဆင်းသက်လာပြီး အေဒီ ၁၀၀၀ နောက်ပိုင်းတွင် စတင်အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ အဓိပ္ပာယ်မှာ “ခရစ်တော်၏လူစု” ဖြစ်၏။ခရစ်စမတ်ဟူသည် “ခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်း” ဟု အဓိပ္ပာယ်ရ သည်။ အေဒီ ၄၀၀ မတိုင်မီကတော့ ခရစ်စမတ်နေ့ကို အတိအကျ သတ်မှတ်ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ ဇန်န၀ါရီ ၆ ရက်၊ မတ် ၂၅ ရက်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက် စသဖြင့် အသီးသီးကျင်းပခဲ့သည်။ အေဒီ ၁၈၀ ၌ ဟစ်ပိုလီတပ် က ဒီဇင်ဘာ ၂၅၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဟု ဖော်ပြခဲ့ပြီး ကွန်စတင်တိုင်း ဧကရာဇ်ဘုရင်ကြီးစိုးသောကာလ အေဒီ ၃၂၀ တွင် ရောမမြို့ရှိအသင်းတော်များ၌ ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ကို သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ အေဒီ ၃၅၄ တွင် ဖီလိုကယ်လပ်၏ ပြက္ခဒိန်၌ ဒီဇင်ဘာ ၂၅၊ သောကြာနေ့ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဆီးရီးယားနှင့် အာမေးနီးယား နိုင်ငံတို့မှလွဲ၍ နိုင်ငံအသီးသီးတွင် ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ဟု သတ်မှတ်ခဲ့ကြပြီး ယခုအခါ အနောက်နိုင်ငံတချို့တွင် ဇန်န၀ါရီ ၆ ရက်နေ့ကို ခရစ်စမတ်နေ့အဖြစ် ယနေ့တိုင် ကျင်းပဆဲဟု သိရသည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များက ခရစ်စမတ်ကို Christmas ဟုရေးခြင်းကိုသာ လက်ခံကြပြီး X’mas ဟု အလွယ် ရေးခြင်းကို နှစ်သက်လက်ခံခြင်းမရှိပါ။
အချို့က ရှေးရောမအင်ပါယာရှိ Saturanalia လူမျိုးများ၏ ရိုးရာနတ်ပွဲမှာ အသုံးပြုခဲ့သည့် အမြဲစိမ်း သစ်ပင်မှ စတင်သည် ဟုဆိုပြီး အချို့က မြောက်ပိုင်းဥရောပရှိ သစ်ပင်ကိုးကွယ်သည့် Druid လူမျိုးများက အစပြုခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ပထမဆုံး ခရစ်စမတ်သစ်ပင်ကို ၁၆၀၄ ခုနှစ်တွင် ဂျာမန်လူမျိုးများ က စတင် အသုံး ပြုခဲ့ကြောင်း သိရှိရပြီး ပြဇာတ်ပြရန် ပြင်ဆင်သည့်အခါ အသုံးပြုလေ့ရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ပရဒိသုဘုံ သစ်ပင်ဟုခေါ်ဆိုကာ ယင်းသည် ဧဒင်ဥယျာဉ်ကို ပြသခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ပြဇာတ်ကပြပြီး သည့်အခါ အိမ်တွင်အလှပြင်ဆင်ရာ၌ အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
ယခုခေတ်သစ်ကမ္ဘာတွင် ခရစ်စမတ်သစ်ပင်များကို ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များသာမက ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်မဟုတ်သူများ ကပင် ဒီဇင်ဘာရောက်သည်နှင့် ငွေကုန်ကြေးကျခံကာ လှပခမ်းနားစွာ ဆင်ယင်လာကြသည်။ စူပါမားကက်ကြီးများတွင် စားပွဲတင် ခရစ်စမတ်သစ်ပင်ကစ၍ လူတစ်ရပ်စာမက ကြီးထွားမြင့်မားလှသည့် ခရစ်စမတ်သစ်ပင်ကြီးများ အပြိုင်အဆိုင် ခင်းကျင်းရောင်းချကြ သည်။ စားသောက်ဆိုင်ကြီးများတွင်လည်း ခရစ်စမတ်ကာလ၏အငွေ့အသက်ကို ဖော်ပြသောအားဖြင့် ဆိုင်တွင်းဆိုင်ပြင် ခရစ်စမတ် သစ်ပင်များ လှပစွာဆင်ယင်လျက် စားသုံးသူများကို ဆွဲဆောင်ကြသည်။ မည်သို့ဖြစ်စေ ခရစ်စမတ်သစ်ပင်သည် တြိဂံအသွင် အခြေကြီးမားလျက် အပေါ်သို့ကျဉ်းမြောင်းသွားကာ အဖျားချွန်းလျက် ထိပ်ဆုံးတွင် ကြယ်တစ်စင်းပုံရှိရပါမည်။ ထိုကြယ်သည် ဗက်လင်ကြယ်ကို ဖော်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်ကာ ခရစ်တော်မွေးဖွားရာဗက်လင်မြို့ကို ညွှ့န်ပြသော နိမိတ် လက္ခဏာလည်းဖြစ်၍ လွန်စွာ အရေးကြီးလှ၏။ ခရစ်စမတ်သစ်ပင် ပတ်လည်တွင် လက်ဆောင်ထုပ်များ စုပုံချိတ်ဆွဲနိုင်သော်လည်း အဓိပ္ပာယ်မဲ့ မဖြစ်စေရပါ။ ခေတ်မီစွာ မည်မျှပင် တီထွင်ဆန်းသစ်လျက် ပြိုးပြိုးပြက်ပြက်ချိတ်ဆွဲစေကာမူ ထိပ်ဦးအဖျားတွင် ကြယ် တစ်စင်းမရှိလျှင် ထိုခရစ်စမတ် သစ်ပင်သည် အတုအယောင် ခရစ်စမတ်သစ်ပင်သာ ဖြစ်ပေမည်။
ခရစ်စမတ်ကတ် ( Christmas Card)
၁၈၄၂ ခုနှစ်က ပန်းချီဆရာကြီး Egley သည် ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းသတင်းကောင်းကို ဝေငှသည့် အနေဖြင့် ကတ်ပြား များပေါ်တွင် မွေးဖွားခြင်းဆိုင်ရာ ရုပ်ပုံများရေးဆွဲကာ သူ၏မိတ်ဆွေ အယောက် ၁၀၀ ထံ ပေးပို့ရာက ခရစ်စမတ်ကတ် စတင် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ ၁၈၄၉ ခုနှစ်တွင် Sir Henry Cole ဆိုသူက ပန်းချီပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သူ John C. Horsely ကို အခကြေး ငွေပေး၍ ရေးဆွဲစေကာ ခရစ်စမတ်ကတ်ဟု အမည်ပေးခဲ့သည်။ ၄င်းကတ်များကို ၁၈၇၅ ခုနှစ် အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် စတင်သုံး စွဲခဲ့ကြသည်။ ၁၈၀၀ ပြည့်လွန်နှစ် အစောပိုင်းကာလများကမူ ယနေ့ခေတ်ကဲ့သို့ ခရစ်စမတ်ကတ်များအလွယ်တကူ ပေးပို့နိုင် ခြင်းမရှိ ခဲ့ပေ။ ယနေ့တွင် နှစ်စဉ် ဒီဇင်ဘာရောက်တိုင်း ခရစ်စမတ်ကတ်များတွင် ဆုတောင်းလွှာများ ရေးလျက် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အပြန် အလှန်ပေးပို့သည့်ဓလေ့ထွန်းကားကျယ်ပြန့်ခဲ့လေပြီ။ ချစ်ခင်သူများအား စာတိုက်မှ ပေးပို့ခြင်းရှိသလို အင်တာနက်သုံးစွဲသူများက အသင့်လုပ်ပြီးကတ်ပြားပုံစံအမျိုးမျိုး Down Load လုပ်ယူပြီး ဆုတောင်းစာသားများ ရိုက်နှိပ်ကာ အီးမေးလ်စံနစ်ဖြင့် မြန်ဆန်စွာပေးပို့ နိုင်ပါပြီ။ ဒါ့ထက် နည်းပညာ ပိုမို ကျွမ်းကျင်သူများကတော့ ဒီဇိုင်းဆော့ဖ်ဝဲလ်များ၊ အင်နီမေးရှင်းများအသုံးပြုကာ ကိုယ်တိုင် တီထွင် ဖန်တီးထားသည့် ၊ တစ်ကမ္ဘာလုံး မည်သူနှင့်မျှ မတူသည့် ကိုယ်ပိုင်ခရစ်စမတ်ကတ်ဆန်းဆန်းလေး များ ပြုလုပ်ကာ အင်တာနက်မှ တစ်ဆင့် အပြန်အလှန်ပေးပို့နိုင်ပြီဖြစ်သည်။
ဂျူးလူမျိုးများသည် ဘီစီ ၁၆၄၊ ဒီဇင်ဘာလ၌ ဗိမာန်တော်ကို သန့်ရှင်းစေသောပွဲ ပြုလုပ်သောအခါ ပန်းခွေများပြုလုပ်ပြီး ဖယောင်းတိုင်များထွန်းညှိပူဇော်ကြသည်။ ၄င်းပုံစံကို ယူကာ ခရစ်စမတ်ချိန်ခါတွင် ဘုရားကျောင်းပရ၀ဏ်၌ ဖယောင်းတိုင်များ များပြားစွာ ပူဇော်ထွန်းညှိလာကြခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုအခါ ဘုရားကျောင်း ဗိမာန်တော်အတွင်း တရားဟောစင်မြင့်ထက်တွင်သာ ဖယောင်တိုင်များ ပူဇော်သည်ကို တွေ့ရပြီး ခရစ်စမတ်ချိန်ခါ၌ ဘုရားကျောင်းပရ၀ဏ်တစ်ခုလုံး လျှပ်စစ်မီးကြိုးရောင်စုံများဖြင့် လက်ဝါးကားတိုင်ပုံ၊ ကြယ်ပုံ၊ စန်တာကလော့စ်ပုံ စသဖြင့် ပုံဖော်ကာ ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ခြင်းများ ခေတ်စားလာပြီဖြစ်သည်။
ခရစ်စမတ်ကယ်ရို (Christmas Carol)
ကယ်ရို ဟူသောစကားသည် ပြင်သစ်စကား Carole မှ ဆင်းသက်လာပြီး “သီချင်းဆိုလျက် ၀ိုင်း၍ ကခုန်ကြခြင်း” ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ၄င်းကို အင်္ဂလိပ်စကားဖြင့် Carol ဟုခေါ်ဆိုရာ “တေးဂီတတူရိယာ သံစုံဖြင့် သီဆို ကခုန်ခြင်း”ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ဂရိစကားဖြင့် Carol သည် Chorus ဖြစ်ပြီး “၀မ်းမြောက်သောကြောင့်ထွက်ပေါ်လာသောသီချင်း၊ အော်၍သီဆိုရခြင်း”ဟု အဓိပ္ပာယ် ရသည်။ Christmas Carol ကို Assisi မြို့သား Francis ဆိုသူက အေဒီ ၁၂၁၀ တွင် စတင်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ ဒီဇင်ဘာ ရောက်သည် နှင့် ခရစ်စမတ်ကယ်ရို တစ်အိမ်တက်ဆင်း လှည့်လည်သီဆိုကြရာတွင် များသောအားဖြင့် အလွယ်တကူ ရှိသော guitarနှင့် tambourineကိုသာ တီးခတ်လေ့ရှိသော်လည်း ယခုအခါ mobile keyboardများ သယ်ဆောင်ကာ ဒရမ်စည်းချက်များဖြင့် အသံစုံထုတ် လျက် မြိုင်ဆိုင်စွာလှည့်လည်သီဆိုလာကြသည်။ သို့သော် ယခုအခါ မြန်မာပြည် ရန်ကုန်မြို့တွင် ခေတ်အခြေအနေကြောင့်လားမဆိုနိုင်၊ ယခင်ကကဲ့သို့ carol သီချင်းသံများ များများစားစား မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် မကြားရတော့ပေ။ merry Christmas to you all နှင့် စတင်ကာ Goodbye နှုတ်ဆက်သီချင်း အပိတ်ဆိုသံသာ ကြားရတော့သည်။ တစ်အိမ်လျှင် သီချင်း နှစ်ပုဒ်မျှသာ ဆိုကြတော့သည်။ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများတွင် Christmas Cantata သီချင်းသီဆိုသည့်ဓလေ့တော့ လက်ကျန် ရှိသေးသည်။ Cantata မှာ သီချင်းပုဒ်ရေများစွာပါဝင်သည့် သီချင်းရှည်ကြီးကို ဇာတ်ကြောင်းပြောသူ Narrator ၏ဦးဆောင်မှုအောက်တွင် Choir အဖွဲ့က Soprano,Alto,Tenor, Bass အသံများမြိုင်ဆိုင်စွာဖြင့် ဆက်တိုက် သီဆိုရခြင်း ဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်တွင် ဂျပ်ဆင်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှာ The Night Christ was born သီချင်းရှည်ကြီးကို ဒီဇင်ဘာ ၁၆ရက်နေ့က မြိုင်ဆိုင်စွာ ဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
စန်တာကလော့စ် (Santa Claus)
စန်တာကလော့စ်တွင် နာမည်များစွာရှိသည်။ သူတော်စင်နိကောလပ်စ်၊ စိန့်နိကောလပ်စ်(St. Nickolas)မှ ဆင်းသက်လာ၍ Saint Nickolas မှတစ်ဆင့် Sinter Klaus ဖြစ်လာကာ နောက်ဆုံးတွင် Santa Clausဖြစ်လာသည်။ နယူးယောက်တွင် နှစ်ပေါင်း များစွာက အခြေချနေထိုင်ခဲ့သော ဒတ်ခ်ျလူမျိုးတို့က စတင်ခေါ်ဝေါ် ခြင်းဖြစ်သည်ဟုသိရသည်။ သူတော်စင်နိကောလပ်စ်သည် ကလေး သူငယ်များအား လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ ဆောင်ကြဉ်းပေးလာသူဖြစ်သည်ဟု ဒတ်ခ်ျတို့က ယုံကြည်ကြကာ ဒီဇင်ဘာ ၆ရက်နေ့ တိုင်း ကရုဏာမေတ္တာတော်ရှင်ကို ဂုဏ်ပြုလျက် ပွဲတော်လုပ်ကြသည်။ ဒတ်ခ်ျတို့၏ သူတော်စင်ပွဲတော်မှာ ခရစ်စမတ်ချိန်ခါနှင့် တစ်လတည်း ဖြစ်၍ သူတော်စင်အဘိုးအိုက လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ သယ်ဆောင်လာသည်ဟု ယူဆကာ ခရစ်စမတ်ချိန်ခါတွင် ပုပု၀၀၊ မုတ်ဆိတ် ဖြူဖြူ၊ သိုးမွေးဝတ်စုံ အနီရဲရဲ ဆင်မြန်းထားသည့် ခရစ်စမတ်ဘိုးဘိုးပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ယနေ့ လူအများမြင်တွေ့ နေကြရသော စန်တာကလော့စ်ရုပ်သွင်မှာ ဂျာမနီနိုင်ငံသား တောင်ပိုင်း ဘာဗေးရီးယားပြည်နယ်မှာ မွေးဖွားသည့် အမေရိကန်နိုင်ငံသား သောမတ်စ် နတ်စ်ထ် ဆိုသူ ပန်းချီဆရာက ပုံဖော်ရေးဆွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူ ငယ်စဉ်က အိမ်နီးချင်း ပုပု၀၀ အဘိုးအိုတစ်ဦး ပြုံးရွှင်သော မျက်နှာဖြင့် ကလေးများကို လက်ဆောင် လိုက်ပေးသည်ကို မြင်ယောင်ကာ ကရုဏာအပြည့်နှင့် ပုပု၀၀အဘိုးအိုပုံရေးဆွဲခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ သို့နှင့် ခရစ်စမတ်ရောက်တိုင်း အထူးချစ်ခင်စွာလက်ဆောင်ပေးသည်ဆိုသော စန်တာကလော့စ်ကို ကလေးများက အားကိုးတကြီး မျှော်ကြ သည်။
အနောက်နိုင်ငံများတွင် ကလေးများက စာတိုက်သို့ စာများ ပေးပို့ကာ စန်တာကလော့စ်ထံ လိုချင်တာများ တောင်းကြသည်။ အီးမေးလ်များဖြင့်လည်း စန်တာကလော့စ်ထံ စာများပေးပို့ကြသည်။ လိမ္မာသည့် ကလေးများကိုသာ စန်တာဘိုးဘိုးက ချစ်သည်ဟု မိဘများက ပြောဆိုသွန်သင်ထား၍ ကလေးများက စာများထဲတွင် သူတို့မည်မျှလိမ္မာကြောင်း၊ မည်မျှ မိဘကို ကူညီ လုပ်ကိုင်ပေးကြောင်း သူတို့အရည်အသွေးများကို ဖော်ပြကာ သူတို့လိုချင်တာ တောင်းခံကြသည်ဆို၏။ စာတိုက်ဝန်ထမ်း အင်တာနက် ၀န်ထမ်း ဗော်လန်တီ ယာများက ခရစ်စမတ်ချိန်ခါတွင် ကလေးများပျော်ရွှင်အောင် စာများ ပြန်ရေးပေးကြသည်ဆို၏။ မိဘများကလည်း ဘိုးဘိုးစန်တာ ပေးသွားသည်ဆိုကာ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများကို ကလေးများ အိပ်ချိန်မှာ တိတ်တခိုးပေးလေ့ရှိသည်။ ခရစ်စမတ်ချိန်ခါ တွင် ကလေးများ အထူးပင် လိမ္မာယဉ်ကျေးစွာ နေထိုင်လေ့ရှိပြီး သူတို့ အနှစ်သက်ဆုံးလူကို ဆန္ဒမဲခွဲ ကောက်ခံပါက စန်တာကလော့စ် မှတစ်ပါး အခြား လူမရှိပါချေ။ စန်တာကလော့စ်သည် ကလေးတို့၏ဇာတ်လိုက်၊ မျှော်လင့်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်သလို အနာဂတ်လည်း ဖြစ်သည်။ စန်တာ ကလော့စ် တကယ်မရှိဟု မည်မျှဆိုဆို ယနေ့တိုင် ခရစ်စမတ်ရောက်လေတိုင်း ကလေးတို့သည် စန်တာကလော့စ်ကို အားကိုးတကြီး မျှော်လင့်မိကြမြဲပင်။
သို့ဖြစ်ရာ ခရစ်စမတ်အခါသမယတွင် လှပစွာဝတ်စားဆင်ယင်၊ စားသောက်ပျော်ရွှင် အပေါ်ယံ ခင်းကျင်းမှုများကြား ဖြတ်သန်း မည့်အစား မွေးနေ့တော်ကို တန်ဖိုးထားသောအားဖြင့် ကလေးငယ်များ စံပြုချစ်ခင်ကာ မျှော်လင့်အားထားရမည့်သူများ ဖြစ်စေဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် စန်တာကလော့စ် ဖြစ်အောင် ကြိုးစားသင့်ပေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး စန်တာကလော့စ်အသွင် ဖော်ဆောင်ကာ အနာဂတ်အတွက်မျိုးဆက်သစ်ဖြစ်သည့် ကလေးတို့၏ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးရင်း ပိုကောင်းမည့်မနက်ဖြန်များကို မျှော်လင့်နိုင် ပါသည်။
Posted by PhyoPhyo at Friday, December 21, 2012 Labels: အက်ဆေး
နိုဝင်ဘာ ၁၃ (လူတကာက ကံမကောင်းတဲ့နံပါတ်လို့ စွဲထင်မှတ်တဲ့နေ့)မှာ အဲဒီအခန်းထဲကို မိန်းမတစ်ယောက် ရောက်လာခဲ့တယ်။ မျှော်လင့်ခြင်းတွေ တနင့်တပိုး သယ်ဆောင်ရင်းနဲ့ပေါ့။ တစ်နေ့မှာတော့ အဲဒီ အခန်းဟာ သူမအတွက် ဘာမျှော်လင့်ခြင်းမှ လင်းပွင့်မလာတော့မှန်း အချောက်ချောက်အချားချား သိလိုက်ရတယ်။
ကံတရားက အထူးပြုလုပ်ချက်တွေနဲ့ ဒဏ်ခတ်လိုက်သလိုပဲ။
အဲဒီမိန်းမမှာ အံ့သြဖွယ်လှိုက်လှဲတဲ့ရယ်မောသံတစ်ခုရှိတယ်။ ရင်မောဖွယ်ပူဆွေးတဲ့ ငိုကြွေးသံတစ်ခုလည်း ရှိ တယ်။ အဲဒီမိန်းမဟာ ဆန့်ကျင်ဘက်သဘောတရားတွေအောက်မှာ လူးလှိမ့်ရှင်သန်နေတဲ့ လူမိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ သူမရယ်မောလိုက်ပြီဆို အခြားဘယ်မိန်းမမှ လိုက်မမီနိုင်၊ သူမ ငိုကြွေးလိုက်ပြီဆို အခြား ဘယ်သူမှလာပြီး ချော့မြှူ မရနိုင်။
အဲဒီမိန်းမမှာ အံ့သြဖွယ် လက်တစ်စုံလည်းရှိရဲ့။ အဲဒီလက်တွေက အရာရာကို အနုပညာ အရာမှာ ဟန်ကျပန်ကျ ဖြစ်အောင် ထုဆစ်ဖန်တီးနိုင်တယ်။ ကျောက်သားထုကို ထုဆစ်နိုင်သလို၊ ဖော့ဖယောင်းကို ပုံသွင်းနိုင်တယ်။ သဲမွမွကို ပုံဖော် နိုင်သလို၊ စေးပျစ်ပျစ်ရွှံ့သားကို ကိုင်တွယ်နိုင်တယ်။ ရေလို အရောင်အနံ့အရသာ ထုထည် ဘာမှမရှိတဲ့အရာကိုတောင် အဲဒီမိန်းမရဲ့လက်ချောင်းတွေက ချိုမြစွဲမက်ဖွယ် ထုထည်တစ်ခုအဖြစ် တီထွင်ဖန်တီးမှု ပြုနိုင်တယ်။ နေရာတိုင်းကို အလျင်အဟုန်နဲ့ ပျံ့နှံ့ရွေ့လျားနေတဲ့ လေလိုအရာကိုတောင် ဘယ်ကိုမှ ပျံ့ထွက်မသွားစေဘဲ တစ်နေရာတည်း အုံဖွဲ့ဖြစ်တည်နေအောင် အဲဒီလက်တစ်စုံက ထိန်းချုပ် စုစည်းထားနိုင်စွမ်းရှိတယ်။
သူမလက်က ထုဆစ်လိုက်သမျှ အရာခပ်သိမ်းဟာ အမှန်တရားကို အခြေခံတဲ့အရာတွေသာ ဖြစ်တယ်။ဒါကို လူတချို့က လက်မခံကြဘူး။ အဲဒီမိန်းမမှာ တခြားမိန်းမတွေလို အဖိုးတန်လည်ဆွဲရတနာတွေမရှိဘူး၊ နေ့စဉ်ဖတ်ရှုနေကျ သမ္မာကျမ်းစာထဲက The Truth Shall Make You Free ဆိုတဲ့ကျမ်းပိုဒ်ကို သူမရဲ့လည်မှာ လည်ဆွဲရတနာလို ဆင်မြန်းထားခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူမ ဧကန်အမှန် လွတ်မြောက်မှု ရှိမရှိကိုတော့ ပိုင်းဆစိတ်မြွှာဖို့ မေ့လျော့ခဲ့သူပါ။ အဲဒီအခန်းထဲ ရောက်တဲ့နေ့က စပြီး ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာ အနီရောင်ကတ္တီပါတစ်စလို အဲဒီမိန်းမအပေါ် နိုင့်ထက်စီးနင်းခြုံလွှမ်းထားခဲ့တယ်။ ရဲရင့်ခြင်းအနီ၊ နွေးထွေးတဲ့ကတ္တီပါ၊ သိမ်မွေ့တဲ့ အမည်နာမလေးနဲ့ ဆိုတော့လည်း အဲဒီမိန်းမက ချစ်ခြင်းမေတ္တာအပေါ် သံသယတစ်စွန်း တစ်စမျှ မ၀င်ခဲ့မိဘူးပေါ့။
တကယ်တော့ ချစ်ခြင်းဟာ ရုပ်ဖျက်ထားတဲ့အုပ်စိုးမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်၊ အဲဒီမိန်းမရဲ့ အရာခပ်သိမ်းမှန်သမျှကို လွတ်လပ်စွာ ဖြန့်ကျက် ဆန့်ထွက်မသွားနိုင်အောင် ချည်နှောင် တုပ်ဆိုင်းထားခဲ့တယ်။ ဘုရားသခင်ရဲ့ ကျမ်းစာလာ မိန့်မြွက် စကား “အချင်းမိန်းမတို့ မိမိခင်ပွန်း၏အုပ်စိုးခြင်းကို ၀န်ခံကြကုန်လော့”ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ။ ။ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်သက်ဝင်တဲ့ အဲဒီမိန်းမဟာ ခင်ပွန်းသည်ရဲ့အုပ်စိုးခြင်းခြင်းမှာ စောဒကမတက်ဘဲ နာခံလိုက်လျှောက်ခဲ့တယ်။ နာမည်ကောင်းလေးနဲ့အတူ ကိုယ်ဟန်ကြော့ကြော့လေးတော့ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာပေါ့။ ဘယ်နေရာ ဘယ်ဆီသွားသွား၊ ကြော့ကြော့မော့မော့လေး လှမ်းလျှောက် နေတဲ့ အဲဒီမိန်းမရဲ့ကိုယ်နေဟန်ထားတစ်ခုကိုပဲ အခြားမိန်းမတကာတို့က လှိုက်ဖိုအားကျနေလေရဲ့။ အဲဒီမိန်းမ လျှောက်လှမ်းခဲ့တဲ့ လမ်းကလေးက အခြားမိန်းမတွေ မနာလိုစိတ်ထန်ပြင်းရလောက်အောင် ချောမွတ်ဖြောင့်ဖြူးလွန်း လှတယ်။ တကယ်တော့ အဲဒီမိန်းမရဲ့ခြေဖ၀ါးတစ်စုံ အက်ကွဲကြမ်းရှလို့ သွေးချင်းချင်းနီနေခဲ့တာ ဘယ်သူမှ မမြင်မိကြဘူး။
ဒါ ဘယ်လိုကြောင့်ပါလိမ့်လို့ အဲဒီမိန်းမ အမြဲတွေးပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကို ကြိုးစားထုဆစ်ခဲ့တဲ့ကြားက ထုထည် တစ်ခုမှ အရာမထင်ဘဲ လက်တစ်စုံထဲကနေ လျှောလျှောထွက်ကျနေတဲ့အဖြစ်။ ကြာလာတော့ သွေးပျက်လာတယ်။ အရာရာကို အကောင်အထည်တစ်ခုပေါ်ထွက်နိုးနိုး မှန်းဆမျှော်ရည်ထုဆစ်နေတဲ့ လက်တွေဆီက တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ နာကျင်တဲ့ဝေဒနာကိုသာ ခံစားလာရတဲ့အခါ အဲဒီအခန်းကို သံသယ၀င်ခဲ့ရပြီ။ အလင်းလက်ဆုံးနေရောင်ခြည်အောက်မှာ လက်အစုံကို ပင့်မြှောက်ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်မိတယ်။
“အို…ဘုရားသခင်… ပင့်ကူမျှင်တမျှ ပါးလျလွန်းတဲ့ကြိုးမျှင်မွမွတွေ… အလိုလေးလေး …ကျွန်မရဲ့လက်ချောင်းတွေမှာ အုံကျင်းဖွဲ့လို့၊ များပြားလွန်းလှချည့်”
ကြည့်နေရင်းမှာပဲ မှော်ဘုရင်တစ်ပါးက ပြုစားလိုက်သလို ကြိုးမျှင်တွေက တစ်စတစ်စ တုပ်ခိုင်ကြီးရင့်လာခဲ့တယ်။
“အို အရှင်.. ကယ်မတော်မူပါ ၊ ကျွန်မလက်တွေ လှုပ်မရတော့ပြီကော”
လူယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ကျိန်စာတိုက်သံက အဲဒီအခန်းရဲ့အတွင်းဘက်ဆုံး နေရာတစ်ခုကနေ ထွက်ပေါ် လာခဲ့တယ်။
“အဲဒါ ဘုရားသခင် မင်းကို ဒဏ်ခတ်လိုက်တာ၊ ဘုရားနဲ့ ရှင်း”
မိုးကြိုးအစင်းစင်း ပစ်ခွင်းလိုက်သလို ခြိမ်းခြောက်သံတစ်စက အဲဒီမိန်းမရဲ့ နားထဲကို ချော်ရည်ပူတွေလို စီးဝင်လာခဲ့ တယ်။ မတုံ့ပြန်စဖူး အဲဒီမိန်းမက အဲဒီခြိမ်းခြောက်သံကို အာခံတုံ့ပြန်လိုက်တယ်။
“မဟုတ်ဘူး ဘုရားသခင်က ကယ်တင်ခြင်းအရှင်သခင်၊ အဲဒါ ရှင်လုပ်တာ။ စိတ်နှလုံး တစ်လုံးတစ်ဝ ဆိုတာ ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာပဲ သေနေတဲ့စကားလုံး၊ ရှင်တို့ လက်တွေ့ကျကျ ဘယ်နှခါ မှီငြမ်းသုံးစွဲဖူးသလဲ၊ အဆုံးသတ်မှာတော့ ကျွန်မက ရှင်တို့အားလုံးရဲ့ အခန်းအပြင်ကလူ”
၁၃ ဂဏန်းဟာ ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျခြင်းတွေကို ကိုယ်စားပြုနေသလား။ ၁၃ ဂဏန်းတစ်ခုရဲ့ ဖြားယောင်းမှုကို အောက်မှာ ငုပ်လျှိုးကွယ်ပျောက်နေခဲ့တဲ့ နှလုံးသားတစ်စုံကို အဲဒီမိန်းမက အဲဒီနေ့မှာ တူးဆွဖော်ထုတ်ပစ်လိုက်တယ်။ ၁၃ကြိမ်မြောက်နိုဝင်ဘာရဲ့ ၁၃ရက်မြောက် နေ့တစ်နေ့မှာ။
အဲဒီအခန်းထဲမှာ လက်တွေသေနေတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက် (တစ်နည်းအားဖြင့်) အခန်းတံခါးကို ခြေထောက်တွေနဲ့ ဖွင့်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ပေါ့။ လက်တွေရဲ့အကူအညီ တစ်စုံတစ်ရာ မပါလည်းပဲ ခြေထောက်တွေချည်း သက်သက်နဲ့ တံခါးတစ်ချပ်ကို အသေအချာဖွင့်လို့ရတယ်ဆိုတာ အဲဒီမိန်းမက မသေခင် သက်သေပြခဲ့မလို့။ အခုဆိုရင် အဲဒီမိန်းမဟာ လွတ်လပ်နေသေးတဲ့ ခြေထောက်တွေနဲ့ အဲဒီအခန်းရဲ့အပြင်ဘက်ကို ထွက်ခွင့်ရဖို့ ကျားကုပ်ကျားခဲ ကြိုးစားနေရဲ့။
နေစမ်းပါဦး စကားဖြတ်ပြီး ကျွန်မ မေးစမ်းပါရစေ…
နိုဝင်ဘာဟာ နှင်းကျဖို့ တာဝန်ယူထားတဲ့ ခပ်အေးအေး လလား၊ အခန်းအပြင်ဘက်မှာ နှင်းတွေ ကျနေပြီလား။ အဲဒီမိန်းမကရော အခန်းအပြင်ဘက်ဆီက ဘာကို မျှော်လင့်နေမှာလဲ။ လူယောက်ျား တစ်ယောက်ရဲ့ ဟန်ဆောင်ခြင်းကင်းတဲ့ ရယ်မောသံကို ထာဝရကြားခွင့်ရဖို့လား၊ ပြီးတော့ အဲဒီလူယောက်ျားရဲ့အနားမှာ သူမရဲ့(၁၃နှစ်ကြာ စေ့ပိတ်နေခဲ့ရတဲ့) နှုတ်ခမ်းတစ်စုံကနေ ထာဝရ ချိုလွင်မယ့် ရယ်သံစစ်စစ်ကို အခန်းအပြင်ဘက်က လူယောက်ျားရဲ့ ရယ်သံနဲ့အတူ မြူးထူးစွာ ထုဆစ်ပစ်လိုက်ဖို့လား…..။။။
ကျွန်မ သေလုမျောပါး သိချင်တာက …
အခန်းအပြင်ဘက်ကို အဲဒီမိန်းမ တကယ်ပဲ ရောက်သွားမှာလား၊
တစ်နေ့သောအခါမှာ အင်မတန်ချိုလွင်တဲ့ရယ်မောသံတစ်စုံကို မိုးမြေတုန်ခါအောင် ကျွန်မ ကြားခွင့်ရမှာလား။
ကျွန်မလား၊ ရှင်လား၊ The Ledge ရုပ်ရှင်ကားထဲက ရှယ်နာ ဆိုတဲ့မိန်းမလား၊ ကျွန်မသူငယ်ချင်း စန္ဒာသူသူဝင်း လား၊ ဒါမှမဟုတ် တခြား………။
Posted by PhyoPhyo at Friday, December 21, 2012 Labels: အထွေထွေမှတ်စု, မေမေ့ရဲ့စာ
ခေတ်တခေတ်ဟာ ပြောင်းလဲ တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ တဘက်ကကြည့်ရင်လည်း ကျွန်မ တို့ရဲ့ ဟန်ပန်အမူအရာတွေ တဖြည်းဖြည်းမယဉ်မကျေး ကြမ်းတမ်း ရိုင်းစိုင်းလာနေတာ တွေ့ နေရပါတယ်။ ဒါဟာ ခေတ်နှင့်အညီ ပြေးလွှားလှုပ်ရှားနေရလို့ စသည် အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီး ဆင်ခြေ ဆင်လက် ပေးမယ် မကြံပါနှင့်။ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့တဲ့ လူလိမ်မာ ကလေးတွေ လူကောင်းလေးတွေ ဖြစ်အောင်သာ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ။ စဉ်းစားကြရအောင်လား။
လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၅၀ သို့ မဟုတ် အဲဒီလောက် အချိန်တုံးကတည်းက လူတွေ ပိုပို ရိုင်းစိုင်းလာနေတာပါ။ "The Little Book of Etiquette “ စာအုပ်ကို ရေးသားသူ စာရေးဆရာ “Patsy Rowe” ပြောတာက “တိတိကျကျ တိုတိုတုတ်တုတ်ပြောရရင် ဒါဟာ ခေတ်လူတွေ အဖို့အချိန်မလုံလောက်မှု အချိန်ရှားပါးမှု ကြောင့် ပါပဲ" တဲ့။
ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်မတို့ဟာနည်းပညာပေါင်းစုံ အတတ်ပညာပေါင်းစုံ တိုးတက် ဖွံ့ ဖြိုးထွန်းကားလာနေတဲ့ ဤခေတ်ကြီးနှင့်အမှီ အံ့ဖွယ် ကမ္ဘာကြီးနှင့် အမှီ လိုက်နိုင်ဖို့ ဆိုတာအချိန်များစွာ လိုအပ်နေပါတယ်။ အချိန်အများကြီးပေးဆပ်ရပါတယ်။ မနက် မိုးလင်းလာရင် ကျီကျီကျာကျာ အော်မည်နေတဲ့ ငှက်ကလေးတွေတေးဆိုသံကို ကျွန်မတို့ နားမထောင်အားပါဘူး။ လုပ်ငန်းဝင်စရာ အလုပ်တွေက တောင်ပုံရာပုံ ဖြစ်နေပါပြီ။ ခုဆို မိုးလင်းတာနှင့် ကျွန်မတို့လုပ်ချင်တာက အင်တာနက်ပဲ။ ဒါမှ မဟုတ် မိုဘိုင်းလ် ဖုန်းပေါ့။ လကုန်ရင် မိမိသုံးစွဲထားတဲ့ အခကြေးငွေ ဘီလ် စာရင်းလဲ ရှင်းရအုံးမယ်။ လုပ်ရမှာက အချိန် ၃၀စက္ကန့် လောက်ပါ ကလစ် တစ်ချက် နှစ်ချက် နှိပ်လိုက်ရုံနှင့် အားလုံး ပြီးမြောက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒီလို ကိစ္စကလေးတွေ က ထောင်သောင်းချီ ရှိနေတာကလား။
Would It Kill You To Stop Doing That ? A Modern Guide to Manners စာအုပ်ကို ရေးသားသူ စာရေးဆရာ “Henry Alford “ က ပြောရာမှာ “လူတွေရဲ့ဟန်ပန်မူရာဟာ အေးးဆေးရှိနေရာက ဆင့်ကဲ ပြောင်းလဲဖြစ်စဉ်များအရ နောက်သို့ တဖန်ဆုတ်သွားတတ်တာမို့ စိတ်ရှည် သည်းခံနိုင်စွမ်းမရှိဘဲ ၀န်ချီစက်နှင့် ပင့်တင်လိုက်ကြတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုရင် လူတွေက 4G speed နှုံးနှင့် အလုပ်မလုပ်နှိုင်ပါဘူး။ သင်သိပါလိမ့်မယ်။ လူတွေဟာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လို နေရာမျိုးမှာ တန်းစီ စောင့်မနေအားပါဘူး။ သူတို့ ရဲ့ အိုင်ဖုန်းကနေ နောက်ကွယ်က ကော်ဖီရောင်းသူထံ ဆက်သွယ်ကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ ခေတ်ပေါ် ဆန်းပြားတဲ့ အတ္တဆန်မှု ရိုင်းစိုင်းမှုလို့ ဆိုမလား။ ဒါကို လူတိုင်းသိပါတယ်။ စင်္ကာာပူ ယဉ်ကျေးမှု သင်တန်းညွှန်ကြားရေးမှူး “ဗိုနီ အိန်ဂျယ်လီနာ" က “ကျွန်မတို့ ဒီခေတ်ပေါ် နည်းပညာတွေကို အပြစ်ပြောလို့ မရပါဘူး ။ ဒါတွေက ကျွန်မတို့ရဲ့ ရှင်သန်မှုကို ကူညီဖြည့်ဆီးပေးနေတာပါ။ ဒါပေမဲ့လည်း အရာအားလုံး ကျွန်မတို့ရဲ့ ဘ၀တစ်ခုလုံးကို ၀ါးမျို ဖုံးလွှမ်းပြစ်မှာကိုတော့ မလိုလားအပ်ဘူး “လို့ ပြောပါတယ်။
အီးမေးလ် အ၀င်အထွက် စစ်ဆေးပါ။ အမြဲ တပ်လှန့် ထားပါ
“ကျွန်မတို့ရဲ့ မေးလ်ဘောက်စ်တွေကို အမြဲ တပ်လှန့်စစ်ဆေးကြရပါမယ်။ အရေးတကြီး လူတွေနှင့် ဆက်သွယ်စရာ ကိစ္စများပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့အားလုံး တစ်နည်းနည်းနှင့် ဆက်သွယ်မှု ရှိနေတယ်ဆိုတာ ကျွန်မတို့သူတို့နှင့်အတူရှိနေတယ်ဆိုတာ လူတွေ သိထားသင့်တယ်” တဲ့။ မလိုလားအပ်တဲ့ အပြုအမူတွေကို ဖယ်ရှားပစ်ပါ တဲ့။ “အိန်ဂျယ်လီနာ “က ရိုးရိုးလေးပြောပါတယ်။
“အချိန်ပို တခု သီးသန့် ထားရှိပါ။ သင့်ဖုန်းမှာရောက်နေတဲ့မက်ဆေ့(ခ်ျ)တွေကို အမြဲ ချက်ကင်လုပ် စစ်ဆေးပါ။ ဒီနည်းဟာ ကမ္ဘာကြီးနှင့်လည်း အမြဲ ထိတွေ့ခွင့်ရှိပြီး မိသားစုနှင့်လည်းမခွဲမခွာ အတူရှိနေမှာပါ။ မိတ်ဆွေတွေ လုပ်ငန်းရှင်တွေ နှင့်ရောပေါ့” တဲ့။ “တချို့ က သင်ဆက်သွယ်လို့မရအောင် သင်မမှတ်မိအောင် အမည်ကို ၀ှက်ထားတတ်ကြတယ်။ဒါ သိပ်ရိုင်းပါတယ်။ ဘယ်သူပို့မှန်းမသိတဲ့ နေရပ်လိပ်စာ မပါတဲ့ အမည်မသိ အီးမေးလ်တွေ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးရောက်လာတတ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို သင် မကြောက်ပါနှင့် တခုခု ပြောချင်ရင် ပြောပါ။ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းပါ။ အီးမေးလ်မှာဖြစ်စေ စာပို့ပါ။လက်မှတ်ထိုးခြင်းမရှိတဲ့ စာတွေကို သင် သိပ်အလေးမထားပါနှင့် သူရဲဘောကြောင်စွာ ပေးပို့သူထံ သင် စာပြန်ကြားနိုင်ပါတယ်။ ပြီးရင် မေ့ပြစ်လိုက်ပါ။ စိတ်အနှောင့်အယှက် မဖြစ်ပါနှင့်။”တဲ့။
တီဗွီရှိုးတွေမှာ သင်ဘာတွေ ကြည့်နေသလဲ
“တီဗွီရှိုး တွေမှာက စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန် ဇတ်လမ်းတွေနှင့် မိန်းမချင်း မသင့်မတင့် စကားပြိုင် ရန်လို တိုက်ခိုက်မှု ဟန်ဆောင်မိတ်ဆွေဖွဲ့ ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကို ဘာ့ကြောင့် တွေ့နေရသလဲ။ ရုပ်မြင်သံကြားဇတ်လမ်းတွေကို ဘာ့ကြောင့် အားပေးနေကြတာလဲ လို့ မလေးရှား (MABIC)အတိုင်ပင်ခံ အရာရှိ “၀င်ဒီလီး“ က ဆို့ပါတယ်။ ”ဒီလိုအဆုံးစွန် ရန်လိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနှင့် စိတ်ကူးပုံဖေါ်ပွဲတွေဟာ သာမန်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ သိသာပါတယ်။ တကယ်တော့ လူသိက္ခာ လူ့ကျင့်ဝတ်တွေ ချိုးဖေါက်နေခြင်းကို ကွင်းကွင်းကွက်ကွက် ပြသနေခြင်းပါဘဲ။ ဒါဟာ ပွဲ ကြည့် ပရိသတ်ကို ဆွဲဆောင်ခြင်းတမျိုးပါ။ အလွန်ရိုင်းပျပါတယ်။ ကျွန်မတို့ လက်ခံနိုင်စရာ မရှိပါဘူး” တဲ့။ အခိုင်အမာ ဆိုပါတယ်။
ဒါဟာ TV ဖန်သားပြင်ပေါ်က သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘ၀တွေနှင့် အလွန်ခြားနားစွာ စိတ်လှုပ်ရှားရင်ခုန်ကြရတဲ့ ဖြတ်ကနဲ လှပ်ကနဲ ပြကွက် တွေပဲ" လို့“၀င်ဒီလီး” က ဆိုပါတယ်။ ကမ္ဘာကျော် စတားတွေကတော့ သရုပ်ဆောင်သွားပြီ။ ကျွန်မ တို့တတွေလည်း ရင်မှာသိမ့်သိမ့် ကြည်နူးကြရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကြည့်ခဲ့ ဖူးတဲ့ “Kimara: Life in the Fab Jane “ ဇာတ်လမ်းတွဲ တခု ကျွန်မမှတ်မိနေတယ်။ လို့ “၀င်ဒီလီး”က အတိတ်ကို ဖေါ်ကျူးလိုက်တယ်။သူမဟာ ကမ္ဘာကျော် အမျိုးသမီးအော်ပရာ အဆိုတော် ရဲ့ဟန်ကို ဒေါသထွက်ထွက်နဲ့ အငမ်းမရ ကြည့်နေခဲ့တယ်။ ဟိုတုံးက သူမရဲ့ နှိမ့်ချတဲ့ အမူအရာတွေ ခုဘယ်မှာလဲ။ တွေ့ နေရတာက သူမရဲ့ မထီတထီ ဟန်ပန်အမူအရာတွေ ရိုင်းပျတဲ့ စော်ကားမော်ကား အနေအထား။ နောက် သူ့ဇာတ်လမ်းတွေကို မျှော်တလင့်လင့် စောင့်မကြည့်တော့ ပါဘူး တဲ့။ လူတွေအားလုံးကတော့ ဒီလို မဟုတ်ကြဘူးဆိုတာ ကျွန်မတို့ နားလည်ကြရပါမယ် တဲ့။
ကျွန်မတို့ တယောက်ကို တယောက် အပြန် အလှန် တုံ့လှယ်ချစ်ခင်မှု ထားရှိကြောင်း ဟန်ပန်မူရာများဖြင့် ဖေါ်ပြနိုင်ပါတယ်။ အနည်းဆုံး သင့်မှာ ကောင်းကျိုးဆိုးပြစ်ကို သိမြင်နိုင်တဲ့ အကျိုးရလဒ်ကို သိမြင်နိုင်တဲ့ စိတ်ခွန်အားရှိရပါမယ်။ လူအချင်းချင်း အပြန်အလှန် လေးစားမှု မရှိရင် လူယဉ်ကျေး မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ သင်က ပထမတကြိမ် တံခါးဖွင့်ထားရင်သို့ မဟုတ် သင်က တကြိမ်ကျေးဇူးပြုထားရင် နောင်အခါ သင့် ကို တံခါးဖွင့် ကြိုဆိုကြမှာ ကျေးဇူးပြုလာကြမှာ အမှန်ပါဘဲ။ တကယ်လို့ သင် အကြောင်းတခုခုကြောင့် ယမ်းပုံမီးကျဖြစ်နေရင် အဖြေရှာဖို့ မလွယ်ဘူးဆိုတာ သင်သိထားပါ။ ဒါဟာ လူ့ကျင့်ဝတ်ကို စည်းမစောင့်ခြင်းဖြစ်တယ်။
အကျိုးမရှိတဲ့ သံသယတွေ ဖယ်ရှားပါ
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လတုံးက သားနှင့် စေ့စပ်ထားသူ မိန်းခလေးတယောက် သူ့ မိခင် ဖြစ်လာမယ့်သူ ထံ မချေမငံ ရိုင်းပျစွာသံသယစကား စွပ်စွဲ ပြောဆို တဲ့ အီးမေးလ် တစောင် ပို့ ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူမကိုယ် သူမတော့ မှန်တယ် ဟုတ်တယ် ထင်နေတယ်။ တခြားသူတယောက်က ရှင်းလင်း ပြောပြ ရတာမျိုး တွေ့နေရတယ်။ တချို့ လူတွေဟာ လေ့လာသင်ကြားမှုမရှိခဲ့တဲ့ အတွက် အသိဥာဏ် ပညာ မရှိတဲ့အတွက် အမှား ကို အမှားမှန်းမသိကြပါဘူး။ ရိုင်းတာကို ရိုင်းမှန်းမသိကြပါဘူး။ အမှား မလုပ်ဖူးဘူး ရိုင်းပျခြင်း မရှိဖူးလို့ဆိုနေတဲ့သူတွေက သူ တို့ မှားနေတာကိုမှားမှန်းမသိဘဲ သူတို့ ရိုင်းနေတာ ကို ရိုင်းမှန်းမသိဘဲ စိတ်ထင်ရာ မှန်တယ် ဇွတ်ပြောနေကြခြင်းဖြစ်တယ်။
လူတွေဟာ သိမ်မွေ့ခြင်းကင်းစွာ ယဉ်ကျေးမှု ကင်းစွာ အချိန်ကို ဖြုံးတီး အသက်ရှင်နေကြတယ်။ဒီလူတွေကို သင်တွေ့ရင် လူတွေကြားမှာ ယဉ်ကျေးလိမ္မာစွာ နေထိုင်တတ်အောင်ရည်မွန်လာအောင် နည်းပေးလမ်းပြပေးပါ။ အကူအညီပေးပါ" တဲ့။ ယဉ်ကျေးမှု ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင် “အေမီ အယ်လ်ကွန်" နှင့် “အယ်လ်ဖို့ ဒ်" တို့ က ဆိုပါတယ်။ လူ့ သိက္ခာ လူ့ ကျင့်ဝတ်တွေ နှင့် ဆန်းကြယ်စွာ ဖွဲ့ စည်း တည်ရှိနေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ အားလုံးဟာ တဦးကို တဦး လေးစားချစ်ကြည်စွာ တုံလှယ် မေတ္တာမျှဝေ နေထိုင်သွားဖို့ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး လောက၀တ်သိတတ်စွာ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ပေါင်းသင်းဆက်ဆံ နေထိုင်သွားဖို့ အထူးကြိုးစား နေထိုင်ကြစေလိုပါ သတဲ့။
အယ်လ်ကွန်က နောက်ဆုံးအနေနှင့် လိုရင်း တိုရှင်း ပြောလိုက်တာကတော့ “သင် ယခု လမ်းဆုံမှာရှိနေတယ်။ ဒီမျှ ပြောဆိုထားပြီမို့ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ သင် မပြေမလည် တာရှည် မဖြစ်မိပါစေနှင့်။ လူရည်မွန်ကလေးတွေ ဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေထိုင်ကြပါ တဲ့။ ဒီ့ ထက်ပိုပြီး သင့်ကို ဂရုစိုက်မနေအားပါဘူး" တဲ့။
By :Rory Evans & Siti Rohani
Posted by PhyoPhyo at Wednesday, December 19, 2012 Labels: ကဗျာ, ငွေသောင်ယံဦး နှင့် အခြားကဗျာများ, မေမေ့ရဲ့စာ
မေမေ့ကဗျာလေးတွေ တိုတာလေးတွေဆို ၅ ပုဒ် စီလောက် တင်ပေးသွားပါမယ်။
အားလုံးပြီးမှပဲ pdf ဖိုင် တင်ထားပေးလိုက်မယ်နော်။
Happy Christmas for All!
စမ်းချောင်းကလေးများ၏ တီးတိုးရွတ်ဆိုမှုကို သင်ကြားဖူးပါလိမ့်မည်။
ဥသြငှက်ငယ်ကလေးများ၏ ဆွတ်ပျံ့တိမ်းမူးဖွယ် တေးသီကျူးရင့်မှုကိုလည်း သင်ကြားဖူးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ထို့နည်းတူ ခင်မေသစ်၏ တေးကဗျာများသည်လည်း….။
ဆရာကြီး မင်းသုဝဏ် နှင့် တိုင်းရင်းမေဂျာနယ် ကဗျာ့ဥယျာဉ်မှူးကြီး ဦးသော်ဇင် တို့အား ဤစာအုပ်ဖြင့် ကန်တော့ပါ၏။ ။
မိဘနှစ်ပါးနှင့် အကိုကြီး စာရေးဆရာ မောင်ကြည်ရှင် (မြန်မာ့အသံ လက်ထောက်စီစဉ်ရေးမှူး ဦးချင်းစိန်) ၊အကိုငယ် စာရေးဆရာ ဒါရိုက်တာ သန်းစိန်သစ်တို့အားလည်း အလားတူ အထူး ဦးခိုက်ကန်တော့လိုက်ပါကြောင်း။
၁၉၉၇ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၈)ရက် နေ့
စာပေ၀တ္ထု ၊ ရတုကဗျာ၊
For ever remember me,
Aye, still beyond the grave .
Remember that I have,
Well loved thee.
Posted by PhyoPhyo at Monday, December 17, 2012 Labels: ဘာသာပြန်ဝတ္တုတို, မေမေ့ရဲ့စာ
ကလင် ... ကလင် ... ကလင်
နေအရုဏ်မတက်မီကလေးမှာပဲ တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ ဧည့်ခန်းအတွင်း တယ်လီဖုန်းခေါ်သံက ချောက်ချားစရာကောင်းအောင် အဆက်မပြတ် ခုန်မြည်ပေါ်ထွက် လာတယ်။ ခံစားမှု မရှိ အသက်မပါ လေသံက တိုးတိုးညှင်းညှင်း။
Posted by PhyoPhyo at Sunday, December 16, 2012
Posted by PhyoPhyo at Saturday, December 15, 2012 Labels: ပင်ကိုရေးဝတ္ထုရှည်, မေမေ့ရဲ့စာ
ပို့ စ်ကဒ်လေးတွေက အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ပြည့်၀၀ရှိသည်။
ဘွဲ့ နှင်းသဘင် ခန်းမကြီးနှင့် ယင်းသို့ဦးတည်ရာ လူသွားလမ်းကြောင်းတခု ။
အကောက်အကွေ့ မရှိ ဖြောင့်ဖြူးသောလူသွားလမ်းကို စိမ်းစိုသော မြက်ခင်းကလေးက လှပစွာ တဘက်တချက် ၀န်းရံ ထားသည်။ နောက်တခုက သစ်ကိုင်းဖျားမှာ နားခိုနေသောကတ္တ၀ါ ငှက်ကလေးတကောင် အောက်မှာရေးထိုးထားတဲ့ စာမှာတော့ “ငှက်ကလေးကတ္တ၀ါ အစာရှာ၊ ညီမလေးလှကညာ ပညာရှာ” ပါတဲ့။
အော်..ကိုကိုရယ် ..။ ကိုကို့ စေတနာကို ခိုင်နားလည် သဘောပေါက်ပါရဲ့။ကောင်းကောင်းတန်ဘိုးထားမည်။
ဒါပေမဲ့ ဒီကဗျာလေးကို ကိုကို ဖတ်ကြည့်နှင့်ပါဦး။
ရှိပါစေတော့၊စိတ်ကိုချော့၍၊ လျော့ခွေတန့် နား။
ချိန်စောင့်စားမည်၊ လွမ်းအားအစု၊ မျက်ရည်ဥဖြင့်၊
ပြေမှုပြေရာ၊ ပြေကြောင်းရှာလည်း၊ ဗျာပါလှိုင်းပုတ်၊
စိတ်ရှုပ်ပွေနှော၊ လွမ်းရေကြောဝယ်၊ နစ်မျောတွေဝေ၊
မိန်းမောနေမိ၊ တမြေနယ်စံ၊ မယ့်သက်နှံရယ်၊
တိမ်ယံဘွေလမ်း၊ ၀တိန်နန်းမှ၊ စခန်းငှက်သွင်၊
ကွန့် လာချင်ဟု၊ စိတ်တွင်ထွေကူး၊ မကြည်နူးရှင့်၊
လျော့ခွေတန့် နား၊ ချိန်စောင့်စားမည်၊
Posted by PhyoPhyo at Thursday, December 13, 2012 Labels: ကဗျာ, ငွေသောင်ယံဦး နှင့် အခြားကဗျာများ, မေမေ့ရဲ့စာ
မေမေ့ရဲ့ "ငွေသောင်ယံဦးနှင့် အခြားကဗျာများ" စာအုပ်က ကဗျာလေးတွေ အားလုံး တင်ပေးသွားပါမယ်။ အခုရက်တွေတော့ မအားသေးတာနဲ့ မေမေပို့ပေးတဲ့ ကောက်နှုတ်ဖော်ပြချက်လေးပဲ အရင်တင်လိုက်ပါတယ်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
ငွေသောင်ယံဦးနှင့် အခြားကဗျာများစာအုပ်မှ ကောက်နှုတ်ဖေါ်ပြချက်
စာတွေများ တစောင် နှစ်စောင် ၊
မြဆေးမင် ကိုယ်မှာလိမ်းလို့ရယ် ၊
Posted by PhyoPhyo at Thursday, December 13, 2012 Labels: မေမေ့ရဲ့စာ, နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်းပါးများ
၁၉၇၁ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၂ရက်မှာ ချန့်ကိုမွေးဖွားပါတယ်။သူဟာ တရုပ်ပြည်သူ့သမတနိုင်ငံ ကျေးလက်ဒေသရှိ ပြည်သူဆင်းရဲသားလူတန်းစားများရပိုင်ခွင့်အတွက် တက်ကြွစွာ ဦးဆောင်လှုပ်ရှားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ငယ်ရွယ်စဉ်ကာလကတည်းက မျက်စိအလင်းမရခဲ့သော်လဲ မိမိဘာသာ ဥပဒေပညာရပ်ကိုလေ့လာလိုက်စား ဆည်းပူးခဲ့သူ ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားသင်ယူခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးရပိုင်ခွင့်များ လယ်သမားများ လယ်ယာမြေရပိုင်ခွင့်များအတွက် သူက ဦးဆောင် ကိုယ်စားပြု အရေးဆို လှုပ်ရှားခဲ့တယ်။အစိုးရက တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ မိသားစုစီမံကိန်းကိုလည်း ချန် က ဆန့်ကျဉ်ပါတယ်။ ရှင်ဒေါင်း အာဏာပိုင်တွေကို ဆန့်ကျဉ်ပီး တအိမ်ထောင် ခလေးတယောက်မူဝါဒကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ချန်ဟာ ကမ္ဘာမှာ ပေါ်လွင် ထင်ရှားလာပြီး နိုင်ငံတကာက အသိအမှတ်ပြုလာရတယ်။ အမိန့်အာဏာကို ဖီဆန် လှုပ်ရှားခဲ့တာမို့ တ၇ားစွဲဆိုခြင်းခံရပါတယ်။ ၂၀၀၅ စက်တင်ဘာမှ ၂၀၀၆မတ်လအထိ ထပ်ဆင့်ပြီး ဇွန်လအထိ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ချခံရပါတယ်။
Posted by PhyoPhyo at Tuesday, December 11, 2012 Labels: ဟိုသတင်း ဒီသတင်း, အထွေထွေ
Posted by PhyoPhyo at Monday, December 10, 2012 Labels: အထွေထွေ, မေမေ့ရဲ့စာ
Posted by PhyoPhyo at Saturday, December 08, 2012 Labels: နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်းပါးများ
အာဏာ၊ ငွေကြေး၊ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုတွေကြားက အဲဒီလူတွေဟာ ...အာဏာ၊ ငွေကြေး၊ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုတွေကြားက အဲဒီလူတွေကိုပဲ ...အာဏာ၊ ငွေကြေး၊ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုတွေကြောင့်ပဲ .......
အဖြေရှာမရတဲ့ ပုစ္ဆာတွေ၊ အမှန်တရား လိုက်ရှာလို့မတွေ့နိုင်လောက်အောင် ပရိယာယ်များလိုက်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေ စဉ်းစားရတာ၊ သတင်းတွေဖတ်ရတာ ခေါင်းတွေလည်း မကြည်နိုင်တော့ဘူး။ သနားလွန်းမက သနားလာလွန်းတော့လည်း ကိုယ့်အနီးအနားက ခွေးလေးကိုပဲ အားတိုင်း အစားတွေခွံ့ ခွံ့ ကျွေးနေမိတော့တာပဲ။ ခွေးလေးမှာ ရင်ပြည့်ရော့မယ်။ မယုံမရှိပါနဲ့၊ ဒါ တစ်ကယ်ပါ။ လုပ်ချင်တာတွေ ပိုပို များလာပြီး၊ မလုပ်နိုင်တာတွေပို ပို များနေတဲ့ ကိုယ့်အဖြစ်မှာ၊ မကြည်တဲ့ခေါင်း၊ လေးလံတဲ့ စိတ်နှလုံးကိုပိုက်လို့ ကိုယ့်ရဲ့နေ့တွေကို ကိုယ်တတ်နိုင်သလိုပဲ .. ဖြစ်သလိုကျော်ဖြတ်နေရတော့တာပါပဲ။
Posted by PhyoPhyo at Saturday, December 08, 2012 Labels: ပင်ကိုရေးဝတ္ထုရှည်, မေမေ့ရဲ့စာ
Posted by PhyoPhyo at Thursday, December 06, 2012 Labels: ညွှန်းတဲ့ ရုပ်ရှင်